[PDF] ဘိုတဲမှာအကိုဆှဲမယျ - Free Download PDF
ခေါငျး ငုံ့ ပွီး လှေ ခါး က ခပျ သုတျ သုတျ ဆငျး သှား ပါ ...... စောကျ ခေါငျး ထဲ ပနျး ထညျ့ ကာ ကာ မ စညျး စိမျ အ ပွညျ့ အ ၀ ရ ....
ဘိုတဲ မှာအ ကိုဆွဲမယ် ကိုတိုး ကြီးရေး သည် ..။
အ ချိ န် က ၁၉၄၉ ခု နှ စ် ...။ မြန် မာုနိင်င် ငံ လွ တ် လပ် ရေး ရ ပြီးတ နှ စ် စွန်န်း စွန်န်း ကာ လ..။ မြန် မာုနိင်င် ငံ တွင်း မျက် နှာဖြူအ ရာ ရှိကြီးတွေ ဟာ အ ရပ် ဖက် နယ် ဖက် မှိာရှ နေ ဆဲ..။ ..။ ပြည် ခုရိင်င် ..သာ ယာ ၀ တီ မြို့သစ် တော အ ရေုးပိင်င် မ စ္စ တာ စ မစ် ရဲု့ရံးခန်းထဲ က ဘ မိုး ထွ က့် ခဲ တော့အေ၇ုးပိင်င် မင်းပေး လိုက် တဲ့ညွှန်န် ကြား ချက် တွေ သူ့ခေါင်းထဲ မှာရော သူု့ဒိင်င် ရာ ယီ စာ အု ပ် ထဲ မှာရော..ပါ လာ ခဲ့ပါ တယ် ..။ ဘုမိးက သစ် တော ၀န် ထောက် ရာ ထူးအ ဆင့်နဲ့ဒီ နယ် ဘက် ကိုပြောင်းလာ တာ မ ကြာ သေး..။ အ သက် ၂၀ ကျေ်ာ..ရန် ကုန်န် တ က္က သိုလ် က ဘွဲ့ ရ တဲ့ပ ညာ တတ် လူ ရွ ယ် တ ယောက် လဲ ဖြစ် ရာ ထူးလေး က လဲိရှ.... ပိန်န် ပါး ကျစ် လစ် တဲ့ကိုယ် အ ချိုး အ ဆက်ိရှ တဲ့ဘုမိးဟာ မိန်န်း က လေး ရှင်င် တွေ သ မက် ဖမ်းချင် စ ရာ ပါ ဘဲ.... ဘုမိးသူ တည်းုးခိ နေ တဲ့သာ ယာ ၀ တီ မြို့ရဲ့အုစိးရ ဘန် ဂ လိုကိုလဲ ပြန် ရောက် ရော စစ် ၀တ်ုစံ နဲ့လက် နက် ကိုင်င် တ ချို့ ကား ၃ စီးလောက် နဲ့ရောက် လာ တာ နဲ့ဆုံတယ် ..။ လက် နက် ကိုင်င် လူ ငယ် တ ယောက် က သူ့ကိုနု တ် ဆက် ပြီးသူ တို့ ဟာ ....တော ခိုရောင်ုစံ သူ ပုန်န် တွေ ဟာ ရန် ကုန်န် ကိုဆင်းလာ နေ ကြ တာ မို့ လာ ရောက် တား ဆီိးနှ မ် နင်းတဲ့တပ် က ...ဒီ အုစိးရ ဘန် ဂ လိုကိုစစ်ုရံးအ ဖြစ် နဲ့အ သုံး ပြု တော့မယ် လို့ ပြော ပြ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ သူ ဟာ သစ် တော ၀န် ထောက် ဖြစ် ကြောင်း..ဒီ မှာတည်းုးခိးနေ တာ ဖြစ် ပြီးသူ တို့ ရဲ့သစ် တော ဌာ န ပိုင်င် ဘိုတဲ ကိုအ ခု ဘဲ ပြောင်းပေး မယ် လို့ ပြော ပြ လိုက် ပါ တယ် ..။ သူ့အ ထု ပ် အုပိးက သိ ပ် များ လှ တာ တော့မ ဟု တ် ဘူး..။ အိ ပ် ရာ လိ ပ် တ ခု နဲ့အ ရိာရှ တွေ နယ် ပြောင်းရင် သယ် ယူ လေိ့ရှ တဲ့ထင်းရှူး သေ တ္တာာ ကြီးတ လုံး ဘဲုမိ့သူ့လက် အောက် က တော ခေါင်းတွေ က သူ ပြောင်းရ မဲ့ဘိုတဲ ၇ှိတဲ့ရွာက လှည် ည်းးဆင့်ပြီးသယ်ုပိ့ပြောင်းပေး ကြ မှာဖြစ် တယ် ..။ ဘုမိးတို့ သစ် တော ဌာ န အ ရာ ရှိများ လဲ တော ထဲ အ လု ပ် လု ပ် ရ ကြ တာ မို့ ( သူ တို့ အ ခေါ် တော တက် ရ တာုမိ့) သူ တို့ ရဲ့လုံခြုံ ရေး အ တွ က် တွ က် ရော..သား ကောင် တွေ ရဲ့ဘေး ကာ ကွ ယ်ုဖိ့ရော . လက် နက် တွေ ကိုင်င် ဆောင် ကြ ရ ပါ တယ် ..။ သစ် တော ၀န် ထောက် တွေ မှာပု လိ ပ် အ ရိာရှ တွေ လိုဘဲ သစ် တော နဲ့ပတ် သက် တဲ့အ မှု တွေ မှာမှာဖမ်းဆီးတ ရား စွဲ ဆိုပိင်င် ခွင်င့်အာ ဏိာရှ ကြ ပါ တယ် ..။ သူ လှည် ည်းးပေါ် တက် တော့မယ် အ လု ပ် စော စော က စစ် တပ် က အ ရာ ရှိလူ ငယ် က ( ၀န် ထောက် မင်း...သွား တော့မ လား...ကျ နော် တို့ တပ် သား တွေ အ တွ က်ုမံ့ဟင်းခါး စား ဖို့ ပြင် နေ တယ် ...ခင် ဗျားေ၇ာ စား သွား သွား ပါ လား....) လို့ လှ မ်းခေါ် တယ် ..။ သူ တို့ က သာ ယာ ၀ တီ ဈျေးး ထဲ က မုန်န့်ဟင်းခါး အ ထမ်းသည် ကိုအုစိးရ ရိ ပ် သာ ပေါ်အ ထမ်းတွေေ၇ာ
အိုး တွေေ၇ာ တင် ပြီးစား ချင် တဲ ချင် တဲ့လူ တွေ ကိုပြင် ပေး ထည့်ပေုးခိင်င်း ပြီးစား ကြ တာ ပါ...။ ( မ စား တော့ပါ ဘူးဗျာ... ကျ နော် နေ မဲ့သစ် တော ဘိုတဲိရှ တဲ့၇ွာက အ လှ မ်းသား ဗျ...သွား ဗျ...သွား အုံး မယ် ဗျာ...) လက် ပြ နု တ် ဆက် ပြီးနွား လှည် ည်းးနဲ့အေ၇ှ့ဖက် ပဲ ခူုးရိးမ တောင် ခြေ ဆီ ကိုဦးတည် ထွက် ခဲ့ပါ တယ် ..။ လှည် ည်းးပေါ် မှာသူ နဲ့အ တူ ..ပ စ္စည် ည်းးထမ်းသယ် ပေး ခဲ ..တော .့ .တော ခေါင်းတ ယောက် ပါ လာ ခဲ့တယ် ..။ နေ မွန်န်း မ တည့်ခင် ဘဲ ရွာ ကိုရောက် ပါ တယ် ..။ သူ့လက် အောက် က တော အု ပ် တ ယောက် နဲ့၃၀၃ုရိင်င် ဖယ် တွေ လွ ယ် ထား တဲ့အ မှူထမ်းး ၂ ယောက် အဲ ဒီ ရွာက သူ ကြီးနဲ့အ တူ ဘန် ဂ လိုရှေ့က စောင့်နေ ကြ ပါ တယ် ..။ ( ၀န် ထောက် မင်း...ကြွ ပါ...ကြွ ပါ...) ဆိုပြီးပြာ ပြာ သ လဲ ကြို ဆိုကြ တာ ပေါ ..။ .့ .။ သူ ကြီးက တော်နဲ့အိ မ် သား တွေ ကိုလဲ မ လှ မ်းမ ကမ်းမှာတွေ့နေ ၇ တယ် ..။ ဘိုတဲ က ခြေ တန် ရှည် ည် ဘိုတဲ ပါ..။ သစ် တော ဌာ နုပိင်င်ုမိ့ဆင် ပေါ် ကိုဘိုတဲ ပေါ် က နေ တက်ုဖိ့..ဆင် ပေါ် က ဘိုတဲ ပေါ် ကိုဆင်ုးဖိ့..ဘိုတဲ ပေါ် မှာဆင် ရဲ့အ မြင့်နဲ့တ ပြေး ထဲ က ပြင် လေး လု ပ် ထား ပါ တယ် ..။ ခု တော့ဘုမိးက လှည် ည်းးယဉ် နဲ လာ့တာ မို့ လှေ ခါး က ဘဲ ဘိုတဲ ပေါ် တက် ခဲ့တယ် ..။ သူ ကြီးက ( ကျ နော် က ဒီုရွာက သူ ကြီးမောင် ဥာဏ် ပါ ..၀န် ထောက် မင်းစား ရေး သောက် ရေး အ စ စ ဘာ မှ မ ပူ ရ အောင် ကျ နော် စီ စဉ် ထား ပါ တယ် ..လိုတာ အ မိန်န့်ိရှ ပါ ခင် ဗျ....) လို့ တုရိ တ သေ ပြော ပါ တယ် ..။ တော အု ပ် အု ပ် နဲ့အ မှူထမ်းး တွေ က လဲ ဘ မိုး နေ မဲ့အ ခန်းကိုနေ ရာ ချ ထား ကြ ပါ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ ဘိုတဲ ရဲ့အ ရှေ့ဝ ရန် တာ က နေ န ဘေး က တော အု ပ် ဘက် ကိုရပ် ကြည့်နေ တုံး ဘိုတဲ ပေါ် ကိုကော်ဖီ ပု ဂံ ..ရေ နွေးက ရား..ဘီ စ ကစ်ုမံ့တွေ ပါ တဲ လင့်ဘန်းကိုင်င် ထား တဲ့မိန်န်း မ ပျိုတ ယောက် ကိုတွေ့လိုက် ပါ တယ် ..။ သွ ယ် လျ ပေ မဲ့တောင့်တင်းတဲ့ကိုယ် အ ဆက် အ ပေါက်ိ၇ှ တာ သ တိ ပြု မိ ရ တော့သူ က လေး ရဲ့မျက် က် နှာကိုမြင် လိုတာုမိ ...(့ ...( ဟဲ ..က့ ..က လေး မ...) လို့ လှ မ်းခေါ် လိုက် ပါ တယ် ..။ မိန်န်း မ ပျိုလဲ လင် ဘန်းကိုမ နီးမ ဝေး က စား ပွဲပေါ် တင် နေ တဲ့အ ချိ န် ၀န် ထောက် မင်းက လှ မ်းခေါ် လိုက် တာ ကြောင့်ဆတ် က နဲ တုန်န် သွား ရ တယ် ..။ ( ရှင်င်....) ....) သူ့ဖက် လှည် ည့်လာ တဲ့ကျေး တော သူ လေး ရဲ့မျက် က် နှာကိုဘုမိးမြင်လိုက် ရ တဲ့အ ခါ..ချော မော ပြေ ပြစ် လွန်န်း နေ တာ တွေ့လိုက် ရ လို့ အံ့အား သင့်ပြီး..( နံ မယ် ဘယ် လိုခေါ် လဲ..) ..) လို့ မေး လိုက် မိ တယ် ..။ မိန်န်း မ ပျုိလဲ...( ...( ကျော့ရီ ...ပါ ) လို့ ဖြေ တယ် ..။ မျက် က် လွှာ ချ ..ခေါင်း..ခေါင်ုးငံ့ပြီးလှေ ခါး က ခပ် သု တ် သု တ် ဆင်းသွား ပါ တယ် ..။ သူ မိန်န်း မ ပျိုကိုလှ မ်းစကား ပြော လိုက် တာ သူ့လက် အောက် က တော အု ပ် ကိုစံ ထွား က တွေ့လိုက် ဟန် တူ တယ် ..။ သူ့ဆီ ကိုပြေး လာ ပြီး..( ၀န် ထောက် မင်း...ဘာ အ လိုရှ ပါ လဲ ..ဟိုမိန်န်း က လေး ကိုစိ တ် အ ခန့်မ သင့်တာ တွေ ဘာ တွေိရှ လို့ လား ခင် ဗျ...) မေး တယ် ..။ ( မိရှ ပါ ဘူး...ကိုစံ ထွား....သူ က လေး က ဘယ် သူ တုံး ဗျ....) တော အု ပ် ကိုစံ ထွား က ဘ မိုး ထိုင်င်ုဖိ့ကု လား ထိုင်င် ကိုဆွဲပေး ရင်း( အော် ..က လေး မ က သူ ကြီးရဲ့တူ မ ပါ..၀န် မင်း...) လို့ ဖြေ ပါ တယ် ..။ ( ကျ နော် တို့ တော ကြီးထဲ မ တက် ခင် ဒီ ဘိုတဲ မှာခ ဏ တော့နေ ကြ ရ အုံး မှာ..ကိုစံ ထွား...ဒါ နဲ့ဒီ တ ၀ိ်ု က် မှာသစ်ုခိးတွေ သ တင်းဘာ ကြား သေး လဲ...) ...)
( မှန်န် ပါ....တော တက်ုဖိ့က ဆင် စီ စဉ် ထား ပါ တယ် ၀န် မင်း...ဆင် ၂ ကောင် ဇီးကုန်န်း ဘော်ပင် ဆင် စ ခန်းက နေ ဒီ ဖက် ကိုပ စ္စည် ည်းးလာ ပို့ ရင်းရောက် နေ လို့ ၀န် မင်းတော ကြီးကြီးထဲ တက် တဲ့အ ခါ အ တွ က် တော ခေါင်းတွေ ကိုစီ စဉ်ုခိင်င်း ထား ပြီးပါ ပြီ..၀န် ..၀န် မင်း...) ( ဒါ နဲ့ခင် ဗျား..လှ ည်းး လမ်းကူး..ဖါးေ၇ွှကျေ်ာရွာတွေ ဘက် ကျ မ်ွမ်ွး တယ် မ ဟု တ် လား...) ( မှန်န် ပါ ၀န် မင်း..ကျ နော့်မိန်န်း မ က လှည် ည်းးလမ်းကူးက ပါ...) ( အင်း...ဆ ရာ စံ အ ရေး တော်ုပံ စ တာ အဲ ဒီ ရွာတွေ က ပေါ ...မှ .့ ..မှ တ် မိ တယ် မ ဟု တ် လား...) ( မှန်န် ပါ...လှည် ည်းးလမ်းကူးဘိုတဲ မှာသစ် တော အ ရေုးပိင်င် ကိုသတ် ပြီးခြောက် လုံး ပြူး နဲ့လက်ိနှ ပ် စက် တွေ ရ သွား တာ လေ..၀န် မင်း...) ( အင်း..ကျ နော် တို့ တော တက် ရင် အဲ ဒီ ဘိုတဲ ခ ဏ ၀င် လို့ ရ မ လား...) ( ရ ပါ တယ် ၀န် မင်း...ရိုး မ ပေါ် တက် ရင် ဒီ ဘိုတဲ ကိုဘဲ ဖြတ် သွား ရ မှာဘဲ လေ...) ဘုမိးက သ မိုင်င်း ၀င် နေ ရာ တွေ ကိုအ လု ပ် နဲ့ရောက် ရင်းလေ့လာ လိုတာ ကြောင့်ပါ..။ အိုက် စပ် စပ်ိရှ ပြီုးဖံ တ ထောင်းထောင်းနဲ လှည် ည်းးစီးလာ တာ ကြောင့်ရေ ချိုး ချင် စိ တ် ပေါက် လာ တယ် ..။ သူ့ခါး မှာသား ရေ အ နက် ရောင် သေ နတ် အိ တ် နဲ့ထည့်ကာ ချိ တ် ချိ တ် ထား တဲ့ခြောက် လုံး ပြူး သေ နတ် ကိုကု တင် ပေါ် ချွ တ် ချွ တ် တင် လိုက် ပြီးသူ ၀တ် ထား တဲ့ကာ ကီ လက် တိုရှ ပ် အ င်္ကျီကိုလဲ ကြယ် သီးများ ဖြုတ် နေ တယ် ..။ ( ၀န် မင်းရေ ချိုး ဖို့ ရေ ချိုး ခန်းခန်းမှာရေ ဖြည့်ထား ပြီးပါ ပြီ.... ရေ ချိုး ပြီးပြီးရင် နေ့လည် စာ စား ပါ မ လား..ပြင် ဆင်ုခိင်င်း လိုက် ပါ မယ် ...) ( ကောင်းသား ဘဲ...ဘယ် ...ဘယ် သူ ချက် တာ လဲ ဗျ...ကျ နော် တို့ သစ် တော က အ မှု ထမ်းထမ်းတွေ လား...) ( မ ဟု တ် ပါ ဘူးဝန် မင်း..သူ ကြီးက တော်ချက် တာ ပါ..၀န် ထောက် မင်းဒီ မှာနေ သ မျှသူ တို့ တာ ၀န် ယူ ပါ ရ စေ တဲ ...)့ ...) ( ကောင်းပြီ လေ..ကဲ ကျ နော် ရေ ချိုး လိုက် အုံး မယ် ....) ဘုမိးေ၇ ချိုး ခန်းက အ ထွ က် သူ့အ တွ က် ထ မင်ဲးပွ ပြင် နေ တဲ့ကျော့ရီ ဆိုတဲ့မိန်န်း မ ပျိုလေး ကိုစား ပွဲမှာတွေ့လိုက် ရ ပါ တယ် ..။ ( ကျော့ရီ နော်...) ( ဟု တ် ကဲ့ပါ ...) ( ထ မင်းစား ပြီးပြီ လား...) ( ဟု တ် ကဲ့စား ပြီးပါ ပြီ ရှင်င် ....)့ ....) ဘုမိး...မြင် မြင် ချင်းချင်းသူ မ ကိုမေတ္တာသက် ၀င် သွား ပြီ...။အ ...။အ ချိုး အ စား က ပြေ ပြစ် လွန်န်း လှ တယ် မိန်န်း က လေး ရယ် ..။ ရင် နှ စ် မွှာ က ရင် ဖုန်န်း အ င်္ကျီဝတ် ထား ပေ မဲ့တင်းမာ ကော့ထောင် နေ တဲ့အ လုံး အ ၀န်းကိုတွေ့နေ ရ တယ် ..။ အင်း..သား ကောင်းမိ ခင် ဖြစ် မဲ့လုံမ ငယ် ဘဲ..။ ..။ ထွာဆိုင်င် ခါး သေး သေး ရဲ့အောက် က စွင့်ကား တဲ့တင် သာုးစိင်င် တွေ က အ နောက် ကိုကောက် မောက် ထွ က် နေ ကြ တယ် ..။ တော သူ ပေ မဲ့မြို့ သူံရှုးလောက် ပါ ရဲ ..။ .့ .။ ဘုမိးထ မင်းလု ပ် ပါး စပ် ထဲ မ ရောက် သေး..။ ကျော့မေ ရဲ့အ လှ အ ပ တွေ မှာယစ် မူးနေ မိ တယ် ..။ ( စား ပါ..၀န် မင်း...စား ပါ...နောက် နေ့တွေ အ တွ က် လဲ စား ချင် တာ ပြော ပါ ခင် ဗျ... တော သား လေး ဘာ လေး စား ချင် ရင် လဲ စီ စဉ် ပေုးနိင်င် ပါ တယ် ...)
သူ တို့ ပြော တဲ့တော သား ဆိုတာ ဖွ တ် တို့ ပ ဒတ် တို...ယု့ ...ယုန်န် တို့ ဂျိုး တို့ ကိုပြော နေ တာ..။တော ကောင် သား ပေါ ...။ .့ ..။ ဘ မိုး စားချင် တာ က ဒီ အ သား မ ဟု တ် ဘူး.....တော သူ မ လေး အ သား...စား ချင် နေ တာ...။ ဘ မိုး က ကော လိ ပ် ကျောင်ားင်းသား ဘ ၀ ထဲ က မြာ ပွေ သူ ဖြစ် တယ် ...။ ဘုမိးသူ ထ မင်းစား တာ ကိုဘေး က နေ လိုတာ ဖြည့်ဆည်းး ပေး နေ တဲ့ကျော့ရီ ၇ဲ့ကျော့ရှင်င်း တဲ့ကိုယ် လုံး တွေ ကိုမျက် က် လုံး ကြီးပြူး နေ အောင် ဘဲ ကြည့်လိုမ့ ၀ ဖြစ် နေ တာ ကြောင့်ထ မင်းကောင်းကောင်းမ စား ဖြစ် ပါ..။ ( ၀န် ထောက် မင်း....စား မ ကောင်းဘူးလား...ဘာ မျာျးား လိုပါ လိ မ် ..)့ ..) တော အု ပ် ကိုစံ ထွား က မျက် စိ မျက် က် နှာပျက် ပျက် က် နဲ့မေး တယ် ..။ အ တက် လူ ကြီးကိုဖါုးဖိ့က ကိုစံ ထွား မှာတာ ၀န်ိ၇ှ တယ် ..။ သူ အ ဖါး ကောင်းခဲ့လို့ လဲ တော ခေါင်းဘ ၀ က နေ တော အု ပ် ဖြစ် လာ ခဲ့တယ် လေ..။ ကိုစံ ထွား တို့ လိုဗြိ တိ သျှနယ် ချဲ့တွေ ရဲ့အောက် မှာအ မှူထမ်းး ခဲ့သူ တွေ ဟာ ဗြိ တိ သျှမျက် က် နှာဖြူအေ၇း ပိုင်င် နယ်ုပိင်င် တွေ ကို( ကိုယ် တော်...ကိုယ် တော်....) လို့ ခေါ် ဆိုခဲ့တာ...( သ ခင် ကြီး....) လို့ ခေါ် ဆိုခဲ့တာ တွေိရှ ခဲ့တယ် ..။ ( ကောင်းပါ တယ် ဗျာ..အ ရမ်းရမ်းကိုကောင်းတယ် ....) ဘုမိးက စိ တ် ထဲ က ( ကျော့ရီ ရဲ့တင် ပါး ကြီးတွေ...ကောင် ...ကောင်းလိုက် တာ..) လို့ တွေးနေ တာ ပါ..။ ဘုမိးစား ပြီးတာ နဲ့လက် ဆေုးဖိ့ရေ ဇ လုံနဲ့ဆပ် ပြာ က အ ဆင် သင် ..။့ ..။ လက် ဆေး ပြီးတာ နဲ့လက် သု တ် ပု ၀ါ လေး ကိုင်င် ပြီးလက် ကမ်းနေ တဲ့ကျော့ရီ က ဘေး မှာ..။ အင်း.....မိန်န်း မ ယူ ချင် စိ တ် တောင် ပေါက် လာ တယ် ...ဒါ ကြောင့်ရှေးလူ ကြီးတွေ က “ ကျွ န် ကု လား - မ ယား တော သူ ” လို့ ပြော ကြ တာ ဖြစ် မယ် ....အို...မ ...မ ပြီးသေး ဘူး.... ကျော့ရီ က အ ချိုပွဲယူ လာ ပြန် တယ် ..။ သူ့အ နား က ဖြတ် သွား တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့ဖင် တွေ က လမ်းလျောက် လိုက် တဲ့အ ခါ တုံခါ သွား တာ ဘ မိုး တွေ့ရ တယ် ..။ ဗ ရမ်းဗ တာ ခါ သွား သွား တာ မျိုး မ ဟု တ် ဟု တ် ဘူး...။ ကျောက် ကျော တုံး တုံခါ သွား တာ လောက် ပေါ ..။ .့ .။ ကျော့ရီ ကိုကြီးကြီးတင် က ကြက် သား ဟင်းချက်ုဖိ့လာ ပြော တယ် ..။ မြို့က ၀န် ထောက် ဒီ က ဘိုတဲ မှာလာ တည်းး မယ် တဲ ..။့ ..။ ကြီးကြီးတင် နဲ့သူ့ယောကျား င်္ား င်္ ဘဘ ဥာဏ် တို့ ဘိုတဲ ပေါ် လှဲကျင်းင်းဆေး ကျော ပြီးပြီးအ လု ပ် အ ရမ်းများ နေ တယ် လေ..။ ကျော့ရီ လဲုဖိးတင် ကိုေ ခါ် ပြီးကြက် တ ကောင် လည် လှီုးခိင်င်း လိုက် တယ် ..။ုဖိးတင် က ဘ ဘ လက် တိုလက် တောင်ုးခိင်င်း နေ တဲ့ကောင်..ကြီ ..ကြီးကြီးတင် က သူ့ကိုအ မြဲ ကြက် သတ်ုခိင်င်း တယ် လေ..။ သူ က ဘ ဘ ဖက် က ဆွေ မျိုး ထဲ က ဘဲ..။ ..။ ဘူးသီး...ခ ရမ်းသီးနဲ့ပဲ တောင့်ရှည် ည် တွေိရှ နေ တာ နဲ့ဟင်းစ ချက် တယ် ..။ ဘ ဘ ဥာဏ် က သူ ကြီးဆိုတော့မြို့က အုစိးရ လူ ကြီးတွေ လာ ရင် အ စ စ တာ ၀န် ယူ ကျေွးွး မွေး ကြ ရ တယ် လေ.။ လိုအပ် ရင် အိ မ် သာ ကျင်းင်းတွေ တောင် တူးပေး ကြ ရ တယ် ...။ ဟင်းထ မင်းအား လုံး ကျက် ပြီးအ ဆင် သင့်ဖြစ် တော့ကြီးကြီးတင် ကိုသွား ပြော တော ..( .့ .( ဟဲ့ကျော့ရီ...နင် ...နင့်မ လဲ စု တ် ပြတ် နေ ပါ လား..သွား..သွား..ရေုမိးချိုး ..ညည်းး နဲ့အေ..မြို့က ၀န် မင်းလာ ပါ မယ် ဆိုမှ ညစ် ညစ် ပတ် ပတ် နဲ ..ညည် .့ .ညည်းး ကိုရု ပ် က လေိးရှ လိုဲ့ပွ ထု တ် ချင် ပါ တယ် ဆိုမှ...) ...) လို့ ဆူ လိုက် တယ် ..။ ( သိ မှ မ သိ ဘဲ ကြီးမေ ရဲ ...)့ ...) ပြုံး စိ စိ နဲ့ကျော့ရီ .. ရေ ချိုး ဖို့ ပြေး တယ် ..။ သူ့ကိုကြီးကြီးတင် က ပွဲထု တ် မယ် ဆိုပါ လား...။
ရေုမိးချိုး ..အ ၀တ် အ စား သန့်ပြန့်တာ လဲ ပြီးသ နပ် ခါး လိ မ်း....တယ် ..။ ( ၀န် ထောက် မင်းတို့ ရောက် လာ ပြီ ဟေ ..) .့ .) ဘ ဘ ဥာဏ် ရဲ့အ သံ က ကျယ် လောင် လိုက် တာ...။ ဘိုတဲ ဆီ ရောက် တော့လှည် ည်းးပေါ် က ဆင်းနေ တဲ့ဝန် ထောက် မင်းဆိုတာ ကိုတွေ့လိုက် တယ် ..။ ဟင်...၀န် ...၀န် ထောက် မင်းဆိုလို့ အ သက် ကြီးကြီးမှ တ် ပါ တယ် ..။ လူ ရွ ယ် တ ယောက် ပါ လား..။ ကျော့ရီ စိ တ် ထဲ ရင် တွေ ခုန်န် တာ အ ရမ်းဘဲ..။ ..။ ဘာ ကြောင့်လဲ တော့မ သိ ဘူး..။ ယောကျား င်္ား င်္ တွေ တွေ့တိုင်င်း ဒီ လိုရင် မ ခုန်န် ဘူးဘူးပါ ဘူး..။ ဘာ များ ဖြစ် ရ တာ လဲ မိ ကျော့ရီ ရယ် လို့ ကိုယ့်ဖါ သာ စိ တ် ထဲ အ ပြစ် တင် နေ တယ် ..။ ၀န် ထောက် ဆိုတဲ့လူ ညို ထွား က မျက်ျက်ုခံးမွေးထူ ထူ ..ဆံ ပင် လှိုင်း်း တွန့်နဲ့ဘိုင်င် စ ကု တ် မင်းသား လိုပုံမိ့လား တော့မ သိ ဘူး..။ ထ မင်းဟင်းပွဲတွေ ပြင် ပေး ရ တော့လဲ အဲ ဒီ ၀န် ထောက် ဆိုတဲ့လူ က သူ့တ ကိုယ် လုံး ကိုမျက် က် လုံး ကြီးနဲု့စိ က် ကြည့်နေ လိုက် တာ များ ကျော့ရီ ရဲ့အ ၀တ် အ စား တွေ ကိုဖေါက် ထွင်း မြင် နေ တဲ့အ တိုင်င်း ပါ ဘဲ..။ ..။ ( နံ မယ် ဘယ် လိုခေါ် လဲ...) သူ့ကိုရု တ် တ ရက် အ မေး ခံ လိုက် ရ တာ ကြောင့်ကျော့ရီ တုန်န် လှုပ် သွား တယ် ..။ တုန်န် ရီ နေ တဲ့အ သံ နဲ့( ကျော့ရီ ပါ...) လို့ ဖြေ လိုက် တယ် ..။ ၇ှ က် လို့ မျက် က် လွှာ ချ ထား ရ တယ် ..။ ဟင်း...ခက် ပြီ....ကေ ....ကျော့ ရီ ...၀န် ထေါက် မင်းကိုထ မင်းကျွေး တာ တွေ သိ မ်းဆည်းး အ ပြီးသူ မ နေ တဲ့ဘိုတဲ ဘေး က အိ မ် က လေး ပေါ် ပြန် ရောက် လဲ သူ့အ ကြည့်တွေ..ကိုမြင် ယောင် နေ ဆဲ... ... စိ တ် တွေ လှုပ် ရှား နေ တယ် ..။ သူ့ေ၇ှ့မှာလမ်းလျောက် ရ တာ ကိုက စိ တ် ထဲ မ လုံသ လိုဘဲ..။ ..။ မ သိ မ သာ သ မင် လည် ပြန် လှည် ည့်ကြည့်မိ တော့ကျော့ရီ ရဲ့တင် ပါး တွေ ကိုသူ ...သူ..ငေး ..ငေုးစိ က် နေ တာ တွေ့လိုက် ရ တော့ရင် တွေုဖိ ..ကြက် သီးတွေ တ ဖြန်းဖြန်းထ ရ တော့တယ် ...။ ပေါင် ကြား က ဟိုဒင်းဆီ က လဲ နွေးက နဲ..ဖြစ် ..ဖြစ် သွား ရ ပြီးဟိုဒင်းကိုကြုံ့လိုက် မိ တယ် ..။ ကြုံ့လိုက် မိ တော့လဲ...စိုသ လိုလိုဖြစ် လာ တာ ကြောင့်ဘေး ဘီ ၀ဲ ယာ ကိုကြည့်ပြီးဘယ် သူ မှ မိရှ လိုထ့မိန်န် ကိုအ သာ ဖြေ ပြီးလက် နဲ့စမ်းကြည့်လိုက် တော ...ဟယ် .့ ..ဟယ် ..အ ရေ တွေုစိ စွ တ် နေ ပါ လား... အို...ရှ ...ရှ က် လိုက် တာ...မိ ကျော့ရီ..နင် ..နင်...နင် ...နင်...စိ ...စိ တ် တွေ ကြွ နေ ပြီ လား...ဒီ မြို့သား အ ရိာရှ နဲ့နင် နဲ ဘာ့ ဘာ ဆိုင်င် လို့ တုံး...ရူးပါ့ဟယ် ......သူ့ဖါ သာ အ ပြစ် တင် နေ မိ တယ် ...။ ( ကျော့ရီ....) ....) ၇ု တ် တ ရက် ကြီးကြီးတင် ခေါ် သံ ကြောင့်ကျော့ရီ လန့်သွား ရ တယ် ..။ ( ရှင်င်..) ..) ( ဟဲ့ကျော့ရီ....ဘယ် ....ဘယ် ရောက် နေ တာ လဲ..) ( ဘာ လု ပ် ပေး ရ မ လဲ ကြီးမေ..) ( အော်..ငါ နဲ့နင့်ဘ ဘ လှည် ည်းးလမ်းကူးဖက် သွား မ လို..၀န့် ..၀န် ထောက် က လေး က တော တက် ရင် လှည် ည်းးလမ်းကူးဝင် မှာဆိုလို့ အဲ ဒီ က ဘိုတဲ ကိုဝင် ကြည့်မှာတဲ ..။့ ..။ အဲ ဒီ က သူ ကြီးကိုဖိးမှန်န် က နုံ ခြာ ခြာ နဲ့ ... ... လိုတာ သွား စီ မံ ထား မ လို့ ...နင့်ကိုမှာချင် တာ ကုဒိ့မိရှ တုံး ၀န် ထောက် က လေး လိုတာ မှန်န် သ မျှ..အား လုံး လု ပ် ကိုင်င် ပေး လိုက် ...သူ စိ တ် မ ငြို ငြင် စေ နဲ ...့ ... ကြား လား..လုံမ...) ( စိ တ် ချ ပါ ကြီးကြီးမေ...) ( ညီးဒီ အိ မ် လေး မှာဘဲ အိ ပ်...ညီ ...ညီးအိ ပ် ရဲ တယ် မှတူ် လား...ဘိုတဲ မှာလဲ သစ် တော ဌာ န က မောင် ထွန်န်း
တိုိ့ရှ နေ မှာဘဲ လေ...) ( မ ကြောက် ပါ ဘူး..ကြီးမေ ရဲ ..စိ့ ..စိ တ် ချ သာ သွား....) သွား....) နေ့လည် စာ စား တာ နောက် ကျ တော့ည နေ စာ ကိုမှောင် မှ စား ဖြစ် တယ် ..။ ကျော့ရီ က ပြင် ဆင် ခူးခပ် ပေး တော့ဘုမိးသူ မ ရဲ့အ လှ အ ပ တွေ ကိုအ ပြန် ပြန် အ လှန်န် လှန်န် သုံး သပ်ုဖိ့အ ခွင်င့်အ ရေး ရ ပြန် တယ် ..။ လက် ဆွဲမီးအိ မ် ၂ လုံး ထွန်န်း ညှိထား တော့မျောင် လာ ပေ မဲ့ကျော့ရီ ရဲ့အ ကွေ့အ ကောက် အုမိ့အ မောက် တွေ က ထင်းထင်းလင်းလင်းတွေ့မြင် နေ ရ ပါ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ ကျော့ရီ ကိုစ ကား ပြော ချင် ပေ မဲ့တော အု ပ် ကိုစံ ထွား က ထ မင်းစား ပွဲမှာအ နိးကပ် ယပ် ခပ် ပေး နေ တာုမိ့သူ့ရှေ့မ ပြော လိုတာ နဲ့ကိုစံ ထွား ကိုရွာလည် မှာတည်းုးခိ နေ ကြ တဲ့သစ် တော အ မှု ထမ်းထမ်းမောင် ထွန်န်း တို့ ဆီ ကုရိင်င် ဖယ် တ လက် သွား ယူုခိင်င်း လိုက် တယ် ..။ တော အု ပ် ကိုစံ ထွား က ( ၀န် မင်းနဲ့ကျပ်ုတို့ လာ စောင့်အိ ပ် ပေး ရ မ လား..ဒါ မှ မ ဟု တ် မောင် ထွန်န်း ကိုအောက် က ကွ ပ် ပစ် မှာအိ ပ်ုခိင်င်း ပေး မယ် လေ..၀န် မင်း...) လို့ မေး နေ သေး တယ် ..။ ( စောင့်အိ ပ် ပေး စ ရာ မ လိုပါ ဘူး..ကျ နော် က လွတ် လွတ် လပ် လပ် ဘဲ တ ယောက် ထဲ နေ ချင် တယ် ..ရိုင်င် ဖယ် သာ သွား ယူ ပေး ဗျာ...) ( ဟု တ် ကဲ့ပါ...) ကိုစံ ထွား ဘိုတဲ ပေါ် က ဆင်းသွား တော့မှ ...ဘုမိးကျော့ရီ ကိုခေါ် လိုက် တယ် ..။ ( ကျော့ရီ...) ...) ( ရှင်င် ၀န် မင်း...) ( ခ ဏ...) ( ဟု တ် ကဲ ...လာ့ ...လာ ပါ ပြီ...) ...) ကျော့ရီ သူ အ ခါး ရေ နဲ့မြီုးဖိ့ဆတ် သား ခြောက် မီးဖု တ် ကိုထု ပြီးဆီ ဆမ်း..နေ တာ ..။ သူ့ရှေ့ရောက် ပြီးကျောင်းဆ ရာ ရှေ့အ မိန်န့်နာ ခံ နေ တဲ ကေ့ ကျောင်ားင်းသား လေုးပံ နဲ့လက် က လေး နောက် ပစ်..ခေါင် ..ခေါင်ုးငံ့ရပ် နေ တဲ့ကျော့ရီ ကိုကြည့်ပြီးဘုမိးသ ဘော ကျ နေ တယ် ..။ ( ကျော့ရီ..သူ ..သူ ကြီးနဲ့သူ ကြီးက တော်ရော...) ( ဘ ဘ နဲ့ကြီးမေ တို့ ဟိုဖက် ရွာသွား ကြ ပါ တယ် ..မ နက် မှ ပြန် လာ မယ် ထင် တယ် ...) ( ဘာ မှာသွား သေး လဲ....) ( အဲ..ဟိ ..ဟို...၀န် ...၀န် ထောက် မင်းလိုတာ အား လုံး ..ဘာ ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် လု ပ် ကိုင်င် ပေုးဖိ့ဘဲ မှာသွား ပါ တယ် ..ဘာ လိုလို့ ပါ လဲ ၇ှင်င် ....)့ ....) ( ကျော့ရီ နဲ့အေး အေး ဆေး ဆေး တွေ့ချင် တယ် ..) ကျော့ရီ က ခေါင်းလေး ငြိ မ့်ပြ ပါ တယ် ..။ ( ကိုစံ ထွား တော်ကြာ နေုရိင်င် ဖယ် သေ နတ် လာုပိ့လိ မ့်မယ် ..သူ ပြန် သွား ရင် ကျော့ရီ ကိုယ့်ဆီ လာုနိင်င် မ လား ဟင်...) ...) ကျော့ရီ ခေါင်းလေး ငြိ မ့်ပြ ပါ တယ် ..။ ( ပဲ..ခု တော့လု ပ် စ ရိာရှ တာ သွား လု ပ် တော ...) .့ ..) ( ဟု တ် ကဲ့ပါ ရှင်င် ...)့ ...) တော အု ပ် ကိုစံ ထွား ခ ဏ ကြာ တော့သူ ယူုခိင်င်း လိုက် တဲု့ရိင်င် ဖယ် နဲ့ပြန် ရောက် လာ တယ် ..။
( ၀န် မင်း.. ဇ လု ပ် ထဲ မှာကျည် အ ပြည့်ိရှ ပါ တယ် ..ဒီ ကင်းဘတ် စ် စ် အိ တ် ထဲ မှာက ကျည် အုပိ တွေ ပါ...) ( ကောင်းပြီ..ကိ ..ကိုစံ ထွား... ကျ နော့်မှာခြောက် လုံး ပြူး ၇ှိပါ တယ် ..ရိုင်င် ဖယ် က အ ဟန့်ပေါ့ဗျာ...လိုလိုမယ် မယ် ပေါ ..) .့ .) ( မှန်န် ပါ ၀န် မင်း...) ( ဒါ နဲ့ခင် ဗျား တ ပည့်ထဲ က တော ကျ မ်ွမ်ွး တဲ့မု ဆိုး ဆိုတာ...ဘယ် သူ....) ....) ( မောင် ပြား..ပါ ၀န် မင်း...) ( ကျ နော် တို့ တော တက် ရင် သူ့ကိုခေါ် ခဲ့ဗျာ...) ( ဟု တ် ကဲ့ပါ..မှန်န် ပါ....) ( ကဲ...ကိ ...ကိုစံ ထွား...ကျ နော် အေ၇ုးပိင်င် မင်ုးခိင်င်း လိုက် တဲ့အ လု ပ် လေး တွေ လု ပ် လု ပ် လိုက် အုံး မယ် ...) ကိုစံ ထွား အ လိုက် သိ စွာ နဲ့ပြန် သွား ပါ တယ် ..။ သူ ဘိုတဲ ပေါ် က ဆင်းသွား တော့ဘုမိးကျော့ရီ ကိုမျေ်ာ နေ မိ ပြီ.....။ .....။ ကျေ့ာရီ စိ တ် တွေ တ အား လှုပ် ရှား နေ တယ် ..။ ၀န် ထောက် မင်းက သူ့ကိုတွေ့ချင် တယ် တဲ ..။ .့ .။ အို..နေ ..နေ့လည် ထဲ က သူ့အ ကြည့်တွေ က တ မျိုး ဘဲ လို့ ထင် သား..။ ခက် ပြီ..။ ..။ ဘယ် လိုလု ပ် ကြ မ လဲ..။ ..။ သူ...သူ ...သူ...ဘာ ...ဘာ များ ပြော မှာမှာလဲ. ဘာ များ လု ပ် လု ပ် မှာလဲ.... .... အ ချိ န် က လဲ မှောင်မဲ နေ တဲ့ည ဖက် ကြီး...တိ တ် ဆိ တ် နေ တဲ့ရွာစွန်န် က ဘိုတဲ ကြီးပေါ် မှာ..။ ဖိုနဲ့မ...သူ နဲ့ကျ မ...အို....ကေ ....ကျော့ ရီ တ ကိုယ် လုံး ကြက် သီးတွေ ထ ရ ပြန် တယ် ..။ ကြီးကြီးတင် က လဲ သူ စိ တ် မ ငြို ငြင် စေ နဲ ..ဘာ့ ..ဘာ ဘဲ လိုလိုလု ပ် ကိုင်င် ပေး ပါ တဲ ...။့ ...။ အို....ကေ ....ကျော့ ရီ ......... ကျော့ရီ ....ဘာ တွေ လု ပ် လို့ ဘာ တွေ ကိုင်င် ပေး ရ မှာလဲ..... ဟော..ပြော ရင်းဆိုရင်း....တော အု ပ် ကိုစံ ထွား ဘိုတဲ ပေါ် က ဆင်းသွား ပြီ...။ ...။ သူ့လက်ိနှ ပ် ဓါတ် မီးတ ၀င်းဝင်းက တ ဖြေး ဖြေး နဲ့ဘိုတဲ နဲ့ဝေး သွား ပါ ပြီ...။ ...။ ကျော့ရီ ဘိုတဲ ပေါ် ကိုလှ မ်းကြည့်လိုက် တယ် ..။ မီးရောင် တွေ့နေ ရ တယ် ..။ ကျော့ရီ ဘိုတဲ ပေါ် ကိုသွာုးဖိ့ခြေ လှ မ်းပြင် တယ် ..။ အို..အ ..အ ရေး ထဲ သေး ပေါက် ချင် လာ တယ် ..ကြောက် သေး ဆိုတာ ဒါ မျိူး ထင် ပါ ရဲ ..။ .့ .။ အိ မ် နောက် ဖက် က ပြင် မှာဘဲ ထ မိန်န် လှန်န် ပြီးပေါက် လိုက် ရ တယ် ..။ သေး ပေါက် ပြီးတော့လဲ အ ကြောင်းကြောင့်ကြုံ ခဲ့၇ ရင် ညစ် ပတ် မျာားး နေ မ လား ဆိုပြီးဟိုဒင်းကိုရေ နဲ့သေ သေ ချာ ချာ ဆေး လိုက် ပါ တယ် ..။ ကျော့ရီ က တော သူ ပေ မဲ့သန့်သန့်ရှင်င်း ရှင်င်း နေ တတ် တယ် ..။ လှုပ် ရှား နေ တဲ့စိ တ် နဲ့ဘိုတဲ ပေါ် တက် လိုက် တယ် ...။ ၀န် ထောက် ဦးဘုမိးကိုစာဲးပွ မှာစာေ၇း နေ တာ တွေ့ လိုက် တယ် ..။ ကျော့ရီ ခြေ သံ ကိုသူ ကြား ပြီးသူ လှည် ည့်ကြည့်တယ် ...။ ( ကျော့ရီ ...လာ...) ( ၀န် မင်း..ဘာ လု ပ် ပေး ၇ ပါ မ လဲ..အ ..အ ခါး ရေ ထည့်ပေး ရ မ လား....) သူ့မျက် က် နှာကိုမ ကြည့်ဘဲ ခေါင်ုးငံ့မျက် က် လွှာ ချ ပြီးပြီးခပ် တိုး တိုး မေး လိုက် တယ် ..။ ( အ ရင် ဆုံး ပြော လိုတာ က ကျ နော့်ကိုဝန် မင်းလို့ မ ခေါ် ပါ နဲ့ဗျာ....) ဘုမိးက ကျော့ရီ လက် က လေး ကိုဖျတ် တ် က နဲ ဆွဲယူ လိုက် တယ် ..။ အို.... .... ကျော့ရီ လက် က လေး တွေ တုန်န် ရီ နေ ပါ လား....။
( ကျော့ရီ ...စ ကား ပြော ချင် နေ တာ နေ့ခင်းထဲ က ဘဲ.... .... လူ မ လစ် လို..)့ ..) အေး စက် နေ တဲ့ကျော့ရီ လက် ချောင်းချောင်းလေး တွေ ကိုဆု တ် ကိုင်င် ထား ရာ က နေ ပြည့်တင်းဖြူနု နေ တဲ့လက် မောင်းလေး ကိုဘုမိးကိုင်င် လိုက် တယ် ..။ လက် ပြတ် ရင် ဖုန်န်း အ င်္ကျီဝတ် ထား တာုမိ့ချော မွ တ် မွ တ် တဲ့လက် မောင်းသား ဖြူ ဖြူ လေး ကိုသူ ပွ တ် သပ် နေ တယ် ..။ ( ကျော့ရီ သိပ် လှ တာ ဘဲ.....) .....) ကျော့ရီ လက် က လေး တွေ တုန်န် ရီ နေ တာ ဘ မိုး သ တိ ပြု မိ လိုက် တယ် ...။ လက် က လေး တွေ က အေး စက် နေ တယ် ...။ ( ကျော့ရီ ...ရီးစား တွေ ဘာ တွေိရှ လား.....) ကျော့ရီ ခေါင်းခါ ပြ တယ် ..။ ဘုမိးက ကျော့ရီ ရဲ ခါ့း ခါး သိ မ် လေး က နေ ဆွဲ ယူ ပြီးဖက် လိုက် တယ် ..။ သူ့ကိုယ် နဲ့ပူးကပ် သွား တဲ့အ ထိ ဖက် လိုက် တယ် ...။ ( ကျော့ရီ ကိုအ ကိုက မြင် မြင် ချင်းချင်းကိုတ အား ကြိုက် သွား တာ.....) ကျော့ရီ က ဘုမိးဘာ ပြော ပြော ဘာ မှ ပြန် မ ဖြေ ဘူး....။ တ ကယ် တော့ကျော့ရီ က သိ ပ်စ ကား နဲ တဲ့မိန်န်း မ တော့မ ဟု တ် ဘူး....။ ရွာထဲ မှာသူ့ကိုလာ စွာရင် ပြန် ပက် တတ် တဲ့မိန်န်း မ တ ယောက် ပါ...။ အ ခု ဟာ က ကျော့ရီ အ ရမ်းကြောက် နေ တယ် ..။ စိ တ် တွေ လဲ အ ရမ်းလှုပ် ရှား နေ တာ..။ သစ် တော ၀န် ထောက် က သူ့ကိုကြိုက် တယ် ဆိုတာ အံ့သြ စ ရာ..မ ယုံနိင်င် စ ရာ လေ..။ ခက် တာ က ကျော့ရီ က အ ထီးဆိုလို့ ယင်ုဖိ တောင် မ သန်းဘူးဘူးလို့ ပြော ကြ သ လိုဘဲ..။ ..။ ကျော့ရီ က အ ပျိုစင် လေ..။ုဖိ သ တ္တ ၀ါ တွေ နဲ့ထိ တွေ့ဘူးသေး တာ မ ဟု တ် ဘူး..။ ဒီ တော့အ ရမ်းရင် ခုန်န် နေ တယ် ..။ တ ကယ့်ကိုရင် တွေ က တုန်န် နေ တာ..။ ဒု တ် ဒု တ် ...ဒု တ် ဒု တ် နဲ ..။့ ..။ ၀န် ထောက် မင်းသူ့ကိုထက် လိုက် ချိ န် မှာကြောက် လွန်န်း လို..ရှ့ ..ရှ က် လွန်း လို့ သေး တွေ ထွက် ကုန်န် ပြီ လို့ ထင် တာ...ပေါင်ာကား မှာတ အား စိုသွား တာ ခံ စား လိုက် ရ လို...။့ ...။ ဘုမိးက အ ချိ န် ဆိုင်င်း နေ တတ် တဲ့ကောင် မ ဟု တ် ..။ ကျော့ရီ လေး က သူ့ရင် ခွင်င် ထဲေ၇ာက် နေ ပြီ မ ဟု တ် လား..။ အ ခွင်င့်အ ရေး ဆိုတာ ၂ ခါ မ ရ ဘူးဘူးတဲ ..။့ ..။ နောက် တ ခါ ဆိုတာ ပြော လို့ မ ရ ဘူးလေ..။ ခောတ် အ ခါ က လဲ သိ ပ် ကောင်းလှ တာ မ ဟု တ် ဘူး..။ သာ ယာ ၀ တီ မြို့ထဲ ဆုံခဲ့တဲ့တပ် က စစ်ုဗိ လ် လေး ပြော တာ သူ ပုန်န် တွေ နဲ့သူ တို့ မ ကြာ ခင် ဘဲ အ ကြီးအ ကျယ် တိုက် ပွဲ တွေ ဖြစ် တော့မှာဆိုဘဲ...။ ...။ ဘုမိး...ကျော့ရီ ရဲ့ပါး ပြင် လေး ကိုနမ်းလိုက် တယ် ..။ သ နပ် ခါး နံ့လေး သင်းနေ တဲ့ပါး နု နု လေး ရှ က် သွေးဖျာ သွား တယ် ..။ ဖြူဖွေး တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့အ သား ကြောင့်ပန်းနု ရောင် လေး ကိုပြောင်းသွား တာ ကိုလက် ဆွဲမီးအိ မ် ကြီး၂ လုံး ကြောင့်ထင် ထင် ရှား ၇ှား ဘုမိးမြင် ရ တယ် ...။ ( အို..၀န် ..၀န် မင်း....အဲ..အ ..အ ကိုက လဲ.....) .....) သူ့ကိုအ ကိုလို့ စ ခေါ် လို့ ဘုမိးပြံုး လိုက် ပြီးပါး နောက် တ ဖက် ကိုနမ်းလိုက် ပြန် တယ် ..။ ( ချစ် တယ် ကျော့ရီ ရယ် ....) ကျော့ရီ က လက် သီးလေး ကျစ် ကျစ် ပါ အောင် ဆု ပ် ပြီးခေါင်းလေုးငံ့ထား နေ တယ် ...။ ဘ မိုး က ကျော ပြင် လေး ကိုဖွ ဖွ လေး ပွတ် ပေး နေ တယ် ...။ ကျော့ရီ က အ လိုလိုဘုမိးရဲ့ပုခံးထက် မှာခေါင်းလေီးမှ ချ လိုက် မိ တယ် ..။ ဘုမိးရဲ့ကျော ကိုပွ တ် နေ တဲ့လက် ဖ ၀ါး က ကျော့မေ ရဲ့စွင်င့်ကား တဲ့တင် ပါုးစိင်င် တွေ ဆီေ၇ွ့လာ တယ် ..။ ကျော့ရီ နဲ့မျက် က် နှာချင်းချင်းဆိုင်င် ပူးကပ် နေ ကြ တာ ဆိုတော့ဘုမိး၇ဲ့ကိုယ် အောက်ုပိင်င်း က မာ ကျော တဲ့ရှည် ည် မျော မျော အ ရာ တ ခု က ကျော့ရီ ရဲ့ဝမ်းပျဉ်ဉ် သား ချပ် ချပ် လေး ကိုဖိ
ကပ် နေ မိ တော့ပ ထ မ တော့ကျော့ရီ ဘာ များ ပါ လိ မ် လိ မ့်ဆိုပြီးသ ဘော မ ပေါက် မိ ဘူး...။ အို....ခ ....ခ ဏ ကြာ တော့မှ အ မေ ပု သူ့ကိုအ ပျုိ ဖေါ် ၀င် စ က လိင်င် နဲ့ပတ် သက် တာ တွေ ..ယောကျား င်္ား င်္ တွေ အ ကြောင်းပ ညာ ပေး သင် ပြ ခဲ့တာ တွေ ..ပြန် သ တိ ရ မိ သွား ပြီးကြောက် လန့်စွာ နဲ့အ နောက် ကိုါ ခွ ဆု တ်ုဖိ့ကြိုး စား လိုက် တယ် ..။ မ ရ ဘူး..။ အ ကိုဝန် ထောက် မင်းက တ အား ဆွဲကပ် ဖက် တွယ် ထားတာ ကိုး..။ သူ့လက် တွေ က သိ ပ် သန် မာ တာ ဘဲ..။ ..။ လက် ဖ ၀ါး ကြီးက ကျော့ရီ ရဲ့တင် တွေ ကိုဆု တ် ကိုင်င် ထား တော့အ နောက် ကိုါ ခွ လို့ မ ရ ဘူး..။ ( လှ တယ် ကျော့ရီရီ ရယ် ...ရု ပ် တင် မ က ဘူး...ကိုယ် လုံး က ပါ မယ် ဗ မာံရှုး လောက် တယ် ...) ဒီ တ ခါ တော့ကျော့ရီ ခပ် တိုး တိုး လေး အ သံ ထွ က် လာ တယ် ..။ ( မ မြှောက် ပါ နဲ့အ ကိုရယ် ...ကျော့ရီ က တော သူ ပါ..) ( အို..ဒီ ..ဒီ လောက် ဖြူဖွေးး နု ဖတ် ပြီးချော နေ တဲ့တော သူ ..မြန် မာ ပြည်အံနှ့ရှာအုံး...ထ မင်းထု ပ် သိုး သွား မယ် ..ဘယ် မှာတွေု့နိင်င် မ လဲ...) ...) (အ ကိုနဲ့ဘ ၀ ချင်းချင်းက မိုး နဲ့မြေ လိုကွာခြား လှ ပါ တယ် ရှင်င်....) ....) ( ဒါ တွေ နား မ လည် ဘူးကျော့ရီ....မင် ....မင်းကိုအ ကိုသိ ပ် ကြိုက် နေ ပြီ...လက် ...လက် မ လွတ် ချင် တော့ဘူး....) (ကျော့...ကေ ...ကျော့ ...ရီ ...ရီ.....ကြောက် .....ကြောက် တယ် ...) ( ဘာ မှ မ ကြောက် နဲ့..အ ကိုရှ တယ် ...ကျော့ရီ....) ....) ဟင်း.....ကျော့ရီ က ကြောက် တယ် ဆိုတာ သူ့ကိုကြောက် တာ..ဟင်း..ဟင်း..ခက် တော့တာ ဘဲ ရှင်င.....ကေ်.....ကျော့ ရီ ရဲ့တ ခါ မှ ယောကျား င်္ား င်္ သား တွေ မ တိုမ့ ထိ ဘူးတဲ့တင် သား တွေ ကိုသူ...သူ ...သူ....ဆု ....ဆု တ် နယ် နေ ပါ တယ် ...။ အား ရ ပါး ရ ကြီးကြီးကိုကိုင်င် တွ ယ် နေ တော့တာ...။ ကျော့ရီ ရဲ့ပေါင် ၂ ဖက် ကြား က ဟိုဒင်း....ထဲ က ရွ စိ ရွ စိ ဖြစ် လာ သ လိုဘဲ..။ ..။ုစိ စွ တ် နေ သ လိုလဲ ခံ စား မိ ရ ပေ မဲ့အ ကိုရှေ့မှာဘယ် လိုစမ်းကြည့်ုနိင်င် မ လဲ လေ...။ ဘုမိးလဲ ကျော့ရီ ကိုအ တွင်င်း အိ ပ် ခန်းထဲ ကိုခေါ် သွား တယ် ..။ တွန်န့်ဆု တ် တွန့်ဆု တ် နဲ့ကျော့ရီ သူ့နောက် ကိုပါ သွား ရ တယ် ...။ အ တွင်င်း ခန်းမှာတော့မှောင် နေ တယ် ..။ မီးအိ မ်ိ၇ှ နေ ပေ မဲ့ထွန်း မ ထား ဘူး..။ ကျွ န်းကု တင် ကြီးက ကျော့ရီ ကိုခြောက် လှန်န့်နေ လိုဘဲ..။ ..။ ဘုမိးက ကျော့ရီ နဲ့ယှဉ်ဉ် တွဲပြီးကု တင် ပေါ် ထိုင်င် လိုက် တယ် ..။ လက် က တော့ကျော့ရီ ရဲ့ခါး သိ မ် လေး က နေ ဖက် ထား ဆဲ ဘဲ..။ ..။ ( ချစ် တယ် ..ကျော့ရီ ရယ် ...သိ ပ် ချစ် တယ် ....) ခေါင်းကိုတ အာုးငံ့ထား တယ် ..။ သူ ထပ် နမ်းပြန် ပြီ..။ ..။ ပါး နှ စ် ဖက် ကိုနမ်းအ ပြီးကျော့မေ ရဲ့နှုတ် ခမ်းစု စု လေး ကိုသှျူျွု့တ် ခမ်းကြီးနဲ့ပ ထ မ ထိ ကပ် ပြီးနမ်းတယ် ..။ ပြီးတောု့ငံ ပြီးစု တ် တော့တာ ဘဲ..။ ဒါ မျိုး နှုတ် ခမ်းချင်းချင်းစု ပ် နမ်းတာ ကို..ဟိုး ကျော့ရီ ခပ် ငယ် ငယ် ထဲ က အ င်္ဂ လိ ပ် အ ရိာရှ ကြီးနဲ့သူ့မိန်န်း မ ဘိုမ ကြီးလု ပ် နေ တာ တွေ့ခဲ့ဘူးတယ် ..။ ဘိုတွေ နဲ ဘိ့ ဘို ဆန် တဲ့မြန် မာ တွေ လု ပ် ကြ တာ ဖြစ် မယ် လို့ ကျော့ရီ တွေးမိ တယ် ..။ ကြီးကြီးတင် မ နေ့က ည နေ မှာသူ့ကိုသေ သေ ချာ ချာ မှာာ သွား တာ..၀န် ထောက် မင်းကိုစိ တ် အ နှောက် အ ယှ က် မ ဖြစ် စေ နဲ ...သူ .့ ..သူ ဘာ လိုလို..လု ပ် ပေး လိုက် ..ဆိုတာ သ တိ ရ နေ တယ် ...။ အ ကိုဝန် ထောက် မင်းက ကျော့ရီ နှုတ် ခမ်းတွေ ကိုစု ပ် နေ ပြီးသူ့လျာ ကြီးကြီးကိုကျော့ရီရီ ပါး စပ် ထဲ
ထိုး သွင်င်း တယ် ..။ ကျော့ရီ ရဲ့လျာ လေး ကိုပ လူးက လဲ လု ပ် နေ ပြီ...။ ...။ ကျော့ရီ ဘာ လု ပ် ရ မှန်န်း မ သိ ဘူး..။ သူ စိ တ် မ ငြို ငြင် စေ ချင် လို့ ဘာ မှ တော့မ ငြင်းဘူးလေ..။ သူ က ပါး စပ် ချင်းချင်ါး ခွ လိုက် ပြီး....( ကျော့ရီ..အ ..အ ကို့ ကိုပြန် နမ်းလေ...) တဲ ..။့ ..။ ( ကျော့ရီ မ နမ်းတတ် ဘူး...) ( အ ကိုနမ်းသ လိုပြန် နမ်း...) ကျော့ရီ လဲ သူ စု ပ် သ လိုပြန် စု ပ် ပေး ပြီးသူ့လျာ ကြီးကြီးလာ က လိ သ လိုကျော့ရီ လဲ သူ့လျာ ကြီးကြီးကိုပြန် က လိ ပေး လိုက် ပါ တယ် ..။ အ ကိုရဲ့အ နမ်းအ စု ပ် တွေ က ကြာ တယ် ..။ နမ်းစု ပ် နေ တု့း သူ့လက် တွေ က အ ငြိ မ် မ နေ ဘူး..။ ကျော့ရီ တင် ပါး တွေ ကိုဆု တ် နယ် ကိုင်င် တွ ယ် နေ ပါ တယ် ..။ တင် နှ စ် လုံး ကြား ကိုလဲ သူ့လက် ချောင်းချောင်းတွေ က ပွ တ် နေ တယ် ..။ သူ့မာ မာ အ ချောင်းချောင်းကြီးက လဲ ကျော့ရီ ရဲ့ဝမ်းပြင် ကိုဖိ ထောက် နေ တယ် ..။ စိ တ် တွေ တ မျိုး ကြီးး ဘဲ..။ ..။ ပေါင် ကြား က လဲ တ ဆစ် ဆစ် နဲ့ယား သ လိုလို..တ ..တ ခု ခု ကိုတောင့်တ သ လိုဖြစ် နေ တယ် ..။ုစိ စွ တ် စွတ် လဲ ဖြစ် သ လိုဘဲ...။ ...။ နှုတ် ခမ်းကိုစု ပ် နေ ရာ က သူ့နှုတ် ခမ်းတွေ က ကျော့ရီ ရဲ့လည် ပင်းကိုနမ်းနေ ပြန် တယ် ..။ အ ခု မှာဘဲ အ သက် ရှု ရ တော့တယ် ..။ သူ့အ နမ်းတွေ ကြောင့်ကျော့ရီ လဲ..အ ..အ သဲ တ လှ ပ် လှ ပ် ရင် တ ဖိုဖိ ဆိုတာ မျိုး..သူ နဲ့အ တူ ဘာ မှန်န်း မ သိ တဲ လမ့်း ဆုံး တ ခု ကိုလက် တွဲပြီးသွား လိုက် ချင် တဲ့စိ တ် ဖြစ် လာ တယ် ...။ ဘုမိး...တင် သာုးစိင်င် တွေ ကိုထ မိန်န် ပေါ် က နေ ကိုင်င် ရ တာ အား မ ရ တော့ဘူး..။ ကျော့ရီ ရဲ့လျော့ရည်းး ရည်းး ဖြစ် နေ တဲ့ထ မိန်န် ကိုဖြေ ချွ တ် ချွ တ် ပါ တော့တယ် ..။ ကျော့ရီ အ မြန် ဖမ်းဆွဲလိုပေ မဲ့မီမှ လိုက် ဘူး..။ ထ မိန်န် က ပြေ ကွာသွား တယ် ..။ သူ့လက် ထ မိန်န် ထဲ ၀င် လာ ပြီ..။ ..။ ဘုမိးကျော့ရီ ရဲ့ပေါင် တန် တွေ ကိုပွ တ် သပ် နေ တယ် ..။ ကော့ကား နေ တဲ့တင် ပါး ကြီးတွေ ကိုကိုင်င် တယ် ..။ လက် ၀ါး နဲ့နယ် တယ် ..။ ဆု တ် ညှ စ် တယ် ..။ ကောင်းလိုက် တာ....တင် တွေ ကြား ကိုနှုက် တယ် ..။ ကျော့ရီ တွန့်သွား တယ် ..။ ( အ ကို့ ကိုဖက် ထား...) သူ့စ ကား ကိုလိုက် နာ နေ မိ တယ် ..။ စိ တ် ညှို့ခံ ထား ၇ တဲ့သူ လိုဘဲ....။ ....။ သူ့ကိုဖက် ထား နေ တုံး...သူ့လက် ချောင်းချောင်းတွေ က ကျော့ရီရီ ပေါင် ကြား ကိုရောက် သွား လို့ က မန်းက တမ်းကျော့ရီ တာုးဖိ့လု ပ် ပေ မဲ့အ ချိ န် မီမှ တော့ဘူး..။ ကျော့ရီ အ ရမ်းရှ က် မိ တာ..ကျော့ရီ ဟိုဟာ မှာအ ရေ တွေ က တ အာုးစိ နေ တာုမိ့ပါ..။ ဘုမိးက အေ၇ တွေ ၇ွှဲုစိ နေ တဲ့ကျော့မေ ရဲ အ့ကွဲကြောင်းကိုတင် တွေ ကိုကိုင်င် သ လိုဘဲ ကိုင်င် နေ ပါ ပြီ..။ ..။ အို.....ကေ .....ကျော့ ရီ သူ့ပုခံးထက် မှာခေါင်းအပ် ပြီးသူ ပြု သ မှ မျှနု နေ ရ တာ ပေါ့..။ ကျော့ရီ ရဲ့အ ကွဲကြောင်းနု နု လေး ကိုသူ ရွ ရွ လေး ကိုင်င် နေ တာ...။ အို.....အ .....အ ကိုရယ် .....ကျော့ရီ တော့အ သဲ အူ တွေ ဗြောင်းဆန် ကုန်န် ပြီ ရှင်င......။်......။ အ ကိုဝန် ထောက် မင်းရဲ့လက် ညှိုး က ကျော့ရီ အ ကွဲကြောင်းထဲ က နှုတ် ခမ်းသား နု နု လေး တွေ ကြား ပြေး လှာွးဆော့က စား နေ ပြီး..စေ့နေ တဲ့နှုတ် ခမ်းသား လေး တွေ ကြား ထဲ တိုး ၀င်ုဖိ့ကြိုး စား နေ တယ် ..။ ကျော့ရီ နှုတ် ဖျား က ခွေးခွေးမွေးကင်းစ လေး တွေ ညည်းး သ လိုတ အင် အင် နဲ့ညည်းး နေ မိ ရ တယ် ...။ ဘုမိး၇ဲ့တ ဏှာစိ တ် တွေ က အ ရမ်းပြင်းထန် နေ ပြီ..။ ..။ ကျော့ရီ ဆိုတဲ့မိန်န်း က လေး က လဲ သူ ကြုံ ဘူးဘူးခဲ့တဲ့ဟိုတယ် မယ် တွေ..ရော...ကော ..ရော...ကော လိ ပ် ကျောင်ားင်းက ဆိုရှ ယ် ကျ တဲ့..ပါ တီ တက် တဲ့ဘိုလမ်း
နီးတဲ့က ပြား မ တွေ ထက်ေ၇ာုပိ ပြီးချော လှ တောင့်တင်းနေ တာ မို့ အ လွန်န် ဘဲ အား ရ ကျေ နပ် နေ ပါ တယ် ...။ ကျော့ရီ ရဲ့မိန်န်း မ အါင်္ဂ က သ ဘာ ၀ အေ၇ ကြည် တွေ အ ရမ်းကိုစိ နေ တာ ကြောင့်ဘုမိးရဲ့လက် ညှိုး က နှုတ် ခမ်းသား နု နု တွေ ကိုထိုး ခွဲ ပြီးဝင် ရောက် သွာုးနိင်င် လိုက် တယ် ..။ အို......သူ ......သူ...သူ ...သူ့လက် ညှိုး က ကျော့ရီ ကိုယ် ထဲ မှာ....အင်...ဟင် ...ဟင်....ထိ ....ထိုး လိုက် ထု တ် လိုက် နဲ့လု ပ် နေ ပြန် ပါ ပြီ...ရှ ...ရှင်င်.... .... ဘုမိးက လက် ၂ ဆစ် လောက် ဘဲ အ ၀င် အ ထွက် က စား ပေး နေ တာ ပါ..။ လက် ညှိုး က ၀င် ထွက်ုနိင်င် တာ အ ရေ တွေ တွေ တ အား ရွှဲ နေ လို့ ပါ..။ တကယ် တော့ဘုမိးလက် ညှိုး ကိုတင်းတင်းကြီးညှ ပ် ထား သ လိုဖြစ် နေ တာ ပါ..။ ဘ မိုး က ကျော့ရီ ကိုကု တင် ပေါ် ကိုလှဲချ လိုက် ပြန် တယ် ...။ ကျော့ရီ အ ရမ်းလန့်နေ တယ် ..။ သူ...သူ ...သူ ...ဘာ...ဘာ လု ပ် အုံး မှာလဲ....။ ဘ မိုး က ကျော့ရီ ရဲ့ထ မိန်န် ကိုလှန်န် တင် လိုက် ပါ တယ် ..။ ဖွေးက နဲ ပေါင် တန် လှ လှ တွေ နဲ့အ မှေွး ရေး ရေး ပေါက် နေ တဲ့ဆီုးခုံမို့မိ့ကိုဘွား က နဲ တွေ့လိုက် ရ တယ် ..။ ဘုမိးစိ တ် တွေ ၀ုန်န်း က နဲ အိရှန်န် ပြင်းပြင်းထ တောက် သွား တယ် ...။ ( အို...အ ...အ ကို.....အ .....အ ကို...ဘာ...ဘာ...လု ...ဘာ...ဘာ...လု ပ် မ လို့ လဲ ဟင်....) ....) ကျော့ရီ က သူ မ အါင်္ဂ စပ် လှ လှ ကြီးကိုလက် နဲု့ဖံးကွ ယ်ုဖိ့လု ပ် ပေ မဲ့ဘုမိးရဲ့ခေါင်းက သူ မ ပေါင် ကြား မှာရောက် နှင်င့်နေ ပါ ပြီ...။ ...။ အို.... .... ဘ်ုမိးသူ့နှ ခေါင်းနဲ့ဆီုးခံ ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကိုစ ပြီးနမ်းံရှု့ပါ တော့တယ် ....။ ( အကို...ဖု ...ဖုန်န်း ကံ တွေ နိ မ့်ကုန်န် ပါ့မယ် ရှင်င.....မ်.....မ လု ပ် ပါ နဲ ....)့ ....) ကျော့ရီ သူ့ကိုတား ချင် ပေ မဲ့ မ ရ တော ..။ .့ .။ သူ က တ အား ကိုနမ်းနေ တော့တာ ဘဲ...။ ...။ ကျော့ရီ ပေါင် တွေ က လဲ သူ့ခေါင်းကြောင့်စေ့လို့ မ ရ တော ..။ .့ .။ ဘုမိး..တ ဆင့်တိုး ပြီးအ ကွဲကြောင်းနီ ညို ညိုကြီးကိုလျာ ပြား ကြီးကြီးနဲ့စ ပြီးယက် လိုက် ပါ တယ် ...။ ( ဟင်.... .... အ ကိုရယ် .....မ သင့်လျေ်ာပါ ဘူး...င ရဲ င အုံတွေ တော့ကြီးတော့မှာဘဲ ရှင်င......)်......) လျာ ကြီးကြီးက အ ထက် အောက်ုစံ ချီ ဆန် ချီ ..တ ပြတ် ပြတ် နဲ့ယက် နေ တယ် ..။ လျာ ကြီးကြီးက ကျော့ရီ ရဲ့အ ရ သာ ဖူးစောက် စေ့ကိုထိ ထိ သွား တယ် ..။ ကျော့ရီ ထွန်န့်ထွန်န့်လူးရ ပါ ပြီ..။ ..။ ၀န် ထောက် မင်းအ ကိုတ ခု ချင်းချင်းဖြုတ် နေ တဲ့ကာ မ ခ လု ပ် တွေ ကြောင့်ကျော့ရီ ဆိုတဲ့အုရိးခံ အ ပျိုစင် လေး ကာ မ စိ တ် တွေ ထ ကြွ ပြီးတ ဟင်းဟင်းနဲ့သွေးသား တွေ သောင်းကျန်းန်းလာ ရ ပါ တယ် ...။ ဘုမိးလဲ ကျော့ရီ ရဲ့စောက် စိ ကိုလျာ ဖျား နဲ့ဖွ ဖွ လေး ထိုး ထိုး က လိ ပေး တော့ကျော့ရီ ကာ မ အ ဆိ ပ် တွေ တက် ပြီးငှ က် ဖျာားး မိ တဲ့လူ နာ လိုတ ဟင်းဟင်းနဲ့မျက် က် စိ လေး ပိ တ် ပြီးညည်းး နေ တယ် ..။ ဘုမိးရဲ့ါး ဖွ ဖက် တော်လိင်င် တန် ကြီးလဲ တာ ၀န် ထမ်းဆောင်ုဖိ့အ ဆင် သင့်ဖြစ် နေ ညပီ..။ ..။ ဘ မိုး လဲ ခါး က လုံချည် ကိုအ သာ မ လှန ပြီးကျော့ရီ ကိုစ လိုးဖိ့ပြင် ဆဲ...ရွာလည် လောက် ဆိ က တုံး ခေါက် သံ..သံ ..သံ ချောင်းချောင်းခေါက် သံ တွေ တ တုံတုံ...တ တောင် တောင် ထက် ပေါ် လာ လို့ ကု တင် ပေါ် ကုခုန်န် ဆင်းပြီးသေ နတ် တွေ ဆွဲရ တော့တယ် ..။ ကျော့ရီ လဲ မျက် က် လုံး ပွင်င့်လာ ပြီးထ မိန်န် ပြန် ၀တ် တယ် ..။ ( ရွာထဲ ဘာ ဖြစ် က လဲ မ သိ ဘူး....) ( ဘိုတဲ ပေါ် နေုဖိ့မ သင့်ဘူး..အောက် ဆင်းကြ ရ အောင်....) ....) ခ ဏ ကြာ တော့ရွာဖက် က မီးတု တ် တွေ နဲ့လူ တ စု ဘိုတဲ ဘက် ကိုလာ ကြ တာ တွေ့ရ ပြီ...။ ...။
တော အု ပ် ကိုစံ ထွား တို့ လူ စု ပါ လား...။ ( ၀န် ထောက် မင်း...ရွာထဲ တော ကောင် ၀င် လို...)့ ...) ကျား က စည်းုးရိးမ လုံတဲ့နေ ရာ က ၀င် ပြီးနီးရာ တင်းကု ပ် က နွား ကိုဝင် ဆွဲတာ ဖြစ် ပါ တယ် ..။ ကျား တွေ အိုလာ ရင် အ စာ မ ရှာုနိင်င် တော့ရင် ဒီ လိုဘဲ လူ တွေ ဆီ လာ ပြီးအ စာ ဆွဲတတ် ကြ ပါ တယ် ..။ ( သူ ကြီးကိုရွာ စည်းုးရိးတွေ သေ သေ ခြာ ခြာ ကာ ဖို့ ပြော ရ မယ် ...အ စိရှ ရင် ဒီ ကောင် ထပ် လာုနိင်င် သေး တယ် ...ချောင်း...ချောင်းထဲ ရေ ခပ် ဆင်းတဲ့လူ တွေ ထင်းခု တ် တဲ့လူ တွေ သ တိ ပေး ထား ပေါ့ဗျာ ..) ဘုမိးလဲ သူ စား ခါ နီးအ စား ကိုပါး စပ် နားေ၇ာက် မှ ပု တ် ချ တာ ခံ လိုက် သ လိုဖြစ် လို့ စိ တ် ထဲ က ( မ အေ လိုး ကျား...တော်တော်နှောက် ယှ က် တဲ့သ တ္တ ၀ါ ..) လို့ ဆဲ နေ တယ် ..။ ကျော့ရီ ရဲ့ကိုယ် တွင်င်း အ လှ အ ပ တွေ က သူ့မျက် က် စိ ထဲ က ဖျောက် လို့ မ ရ..။ တော အု ပ်.... တော ခေါင်းတွေ နဲ့တော ကောင် အ ကြောင်း..တိုင်င်း ရေး ပြည် ရေး..သစ်ုခိးတဲ့ကိ စ္စ ကာ ကွ ယ်ုဖိ့တွေ စ ကား ကောင်းပြီးမ နက် လင်းခါ နီးမှ ဘုမိးအိ ပ် ဖြစ် တယ် ...။ ကော်ဖီ အ နံ့မွှေး မွှေး ကြောင့်.. ဘုမိးအိ ပ် ရာ ကုနိးလာ တယ် ..။ တော ခေါင်းတ ယောက် က ကော်ဖီ ကိုက ရား ထဲ ကဲငှ့ထည့်နေ တာ တွေ့ရ တယ် ..။ ဘိုတဲ လှေ ခါး က ကျော့ရီ တက် လာ တာ သူ တွေ့တယ် ..။ ကျော့ရီ လက် ထဲ မှာ..အ ငွေ့တ ထောင်းထောင်းနဲ့ကောက် ညှင်င်း ပေါင်းဇ လုံကြီးနဲ့နှ မ်းထောင်းခွ က် တ ခွ က် ..။ ကျော့ရီ က သူ့ဖက် ကိုတ ချက် ကြည့်ပေ မဲ့သူ ကြည့်နေ တာ တွေ့တော့မျက် က် လွှာ ချ လိုက် ပါ တယ် ..။ သူ မ မျက် နှာလေး နီ နီ လေး ဖြစ် နေ တယ် ထင် တာ ဘဲ..။ မျက် က် နှာသစ် သွား တိုက် ပြီးကော်ဖီ သောက် နေ တုံး သာ ယာ ၀ တီ က ရောက် လာ တဲ့သစ် တောုရံးက အ မှု ထမ်းထမ်းက ကျွ န်းက လေး တံ တား မှာသူ ပုန်န် တွေ နဲ့စစ် တပ် တိုက်ဲပွ ဖြစ် တဲ့အ ကြောင်းတွေ သ တင်းလာုပိ့တယ် ..။ သူ့အိ ပ် ရာ နဲ့စောင် တွေ ပြန် ခင်းပေး နေ တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့တင်ုစိင်င် တွေ လှုပ် ခါ သွား တာ တွေ သူ မြင် နေ ရ တာ စိ တ် တွေုနိးကြွ ဖေါက် ပြန် လာ ပြန် တယ် ..။ သူ ကြီးလဲ ပြန် ရောက် လာ တာ တော့ရွာသား တွေ စု ပေါင်းပြီးစည်းုးရိးတွေ ပြန် ကာုဖိ့လု ပ် နေ ကြ ပါ တယ် ..။ ဘုမိးက သူ့သစ် တော အ မှု ထမ်းထမ်းတွေ ကိုလဲုဝိင်င်း ကူုခိင်င်း တယ် ..။ ဘုမိးက အ ကြံ သ မား..။ လူ တွေ အား လုံး ကိုခြံ စည်းုးရိးကာ တဲ့ဆီ သွာုးခိင်င်း တာ..။ သူ ..ည အ ထိ မ စောင့်ုနိင်င် ဘူး..။ ကျော့ရီ နဲ့ထပ် တွေ့ချင် နေ တယ် ..။ လူ လစ် တာ နဲ့ကျော့ရီ ဟင်းချက် နေ တဲ့နေ ရာ ကိုသူ ရောက် သွား တယ် ..။ ဘိုတဲ ဘေး က အိ မ် က လေး...။ အိ မ် နောက် ဘေး မှာမီုးခိးတ လူ လူ နဲ့မီုးခိ ခန်းလေး ထဲ ကျော့ရီ ဟင်းချက် နေ တယ် ..။ သူ လာ တာ တွေ့တော့ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်င် ပြီးမီးပြောင်းမှုတ် နေ ရာ က ထ ရပ် လိုက် တယ် ..။ ( ကျော့ရီ...) ...) ( ရှင်င်..) ..) ( ဘာ တွေ ချက် နေ လဲ..ကျော့ရီ...) ...) ( အ ကိုစာုးဖိ့..ဘူးသီးနဲ့ကြက် သား ဟင်း...) ( ချစ် တယ် ကျော့ရီ ရယ် ...) ဘုမိးက ကျော့ရီ ကိုဖက် လိုက် တယ် ..။ ( ဟင်းချက် နေ လို့ တ ကိုယ် လုံး နံ စော် နေ တယ် ..အ ကို...) ...)
ကျော့ရီ ခေါင်းလေုးငံ့ပြီးပြော တယ် ..။ ( နံ ..နံ...ဂ ...ဂ ရု မုစိ က် ဘူး....) ကျော့ရီ ပါး ပြင် တွေ ကိုနမ်းံရှု့ပါ တယ် ..။ သူ့ရင် ခွင် ထဲ ကျော့ရီရီ တ ကိုယ် လုံး ရောက် နေ ပြီ...။ ...။ ( အ ကို....လူ ....လူ တွေ မြင် ကုန်န် မယ် ..) ( မြင် ...မြင်...) ...) ( ည ကျ မှ အ ကိုရယ် ...) ( မ အောင့်ုနိင်င် ဘူး...ည အ ထိ...) ...) ကျော့ရီ ခေါင်းက အ ပြေး အ လွှား အ ကြံ ထု တ် နေ တယ် ..။ အ ကိုဝန် ထောက် မင်းနဲ့ဘယ် နေ ၇ာ မှာချိ န်းတွေ့ရ မယ် ဆိုတာ...။ ဒီ အိ မ် လေး မှာက အ ချိ န် မ ရွေးကြီးကြီးတင် ရောက် လာုနိင်င် တယ် မ ဟု တ် လား...။ ၀န် ထောက် မင်းကိုထ မင်းချက် ကျွေး ဖို့ က သူ က ဦးစီးစီ မံ ချင် တာ လေ...။ အိုး....အ ကြံ ရ ပြီ....။ ....။ ကျော့ရီ အ ရင် ဆုံး ဟင်းအိုး ကိုမီုးဖိ ပေါ် က ချ တယ် ..။ ( လာ...အ ကို.....) .....) ကျော့ရီ ဘုမိးလက် ကိုဆွဲပြီးအိ မ် အ နောက် ဘက် ပေါက် က ထွက် တယ် ..။ ဘုမိးက လဲ ကျော့မေ သူ့ကိုဘယ် ခေါ် ပါ လိ မ့်လို့ အံ့သြ တယ် ..။ ခြုံ တွေ အ ကွ ယ် ကိုရောက် တော့ကျော့ရီ က မြေ ကြီးပေါ် က သွ ပ် ပြား ကြီးတ ချပ် ကိုမ ပြီးဖယ် လိုက် တယ် ..။ ( ဂျ ပန် ခောတ် ကုဗံုးခိ ကျင်းင်း...လေ..အ ကို....ဘယ် ....ဘယ် သူ မှ သ တိ မ ထား တော့ဘူး....) ဘုမိးနဲ့ကျော့ရီ ...ဗုံုးခိ ကျင်းင်းထဲ ဆင်းခဲ့ကြ တယ် ...။ အ ထဲ မှာက လူ ၁၅ ယောက် လောက်ုခိ အောင်းလို့ ရ အောင် တူးထား တာ ဆိုတော့တော်တော်ကျယ် တယ် ..။ တာ လ ပတ် စ ကြီးတ ခု လဲ ခင်းထား တယ် ..။ အောက် ထဲ ဆင်းလိုက် တာ နဲ့ဘုမိးက သွ ပ် ပြား ကိုပြန် ဆွဲ ကာ လိုက် တယ် ..။ မှောင် မဲ မဲ ထဲ သူ တို့ ၂ ယောက် တာ လ ပတ် ပေါ် ထိုင်င် ချ လိုက် ကြ တယ် ..။ ဘုမိးကျော့ရီ နှုတ် ခမ်းကိုစု တ် နမ်းတော့တာ ဘဲ..။ ..။ ကျော့ရီ လဲ ည က အ ကိုသင် ပေး သ လိုဘှု အ ကို့ ကိုပြန် စု တ် နမ်းလိုက် တယ် ..။ အ ကိုက ကျော့ရီ့ ရဲ အ င်္ကျီကိုကြယ် သီးတွေ ဖြုတ် နေ တယ် ..။ အ မှောင် က လူ ကိုပိ ရဲ တင်းစေ တယ် ..။ ကျော့ရီ အ ကို့ ကိုကူ ညီ ပြီးဖြုတ် ပေး မိ တယ် ..။ ကျော့ရီ အ င်္ကျီလေး ကျ တ်ွတ်ွသွား တော့ဘော်လီ အ င်္ကျီကိုချွတ် ပြန် တယ် ..။ ကျော့ရီ အ ပေါ်ုပိင်င်း ဗ လာ ကျင်းင်းသွား ပေ မြ့အ မှောင် ထဲ မှာုမိ့ကျေ့ာရီ မ ရှ က် လှ..။ ..။ အ ကိုကုနိ့တွေ ကိုလက် နဲ့ကိုင်င် ပါ တော့တယ် ..။ ဖွ ဖွ လေး ကိုင်င် တာ ပါ..။ ကျော့ရီ လဲ အ ကို့ ကိုချစ် မိ စွဲ လန်းမိ သွား ပါ ပြီ..။ ..။ အ ထူးသ ဖြင့်မ နေ့ည က အ ကိုက ကျော့ရီ စောက် ပတ် ကိုယက် ပေး တာ ကျော့ရီ ၂ ခါ လောက် အ ရမ်းကောင်းခဲ့ရ တယ် လေ...။ အို...အ ...အ ကို့ လျာ ကြီးယက် တာ ကျော့ရီ အ သဲုခိ က် အောင် ကောင်းတာ အ ရမ်းပါ ဘဲ..။ ..။ အ ကို့ အ စု ပ် အ ယက် တွေ ကိုစွဲမိ ရ ပါ ပြီ...။ ...။ ကာ မ စိ တ် တွေ ပြင်းထန် နေ ကြ တာ ကြောင့်၂ ယောက် လုံး အ သက် ရှု သံ တွေ ပြင်းလာ ကြ ပြီး..ဘ မိုး က နို့ တွေ ကိုစိ့လာ တဲ့အ ခါ ကျော့ရီ လဲ သူ့ခေါင်းကိုနောက် စေ့က နေ ဆွဲဖက် ထား ပြီးအ ရမ်းကိုထန် လာ ရ တယ် ..။ ကာ မ စိ တ် တွေ မျာားး သ ထက် မျာားး လာ ရ ပါ တယ် ..။ ဘုမိး..နို့ တွေ ကိုတ လုံး ပြီး
တ လုံး တ ပြွ တ် ပြွတ် နဲု့စိ့နေ တယ် ..။ ကျော့ရီ လဲ အ ကို့ ကိုပါ ရ မီ ဖြည့်ပေး ခွင့်ရ တာ ကိုဘဲ အ ရမ်းဝမ်းသာ ကျေ နပ် နေ မိ ရ ပြီးအ ကို့ အ လိုကိုဖြည့်ဆည်းး ပေး လိုလှ ပါ တယ် ...။ ဘုမိးက ကျော့ရီ ရဲ့ထ မိန်န် ကိုဆွဲချွတ် လိုက် တော ကေေ့ ကျာ့ ရီ က လဲ တာ လ ပတ် အ ခင်းပေါ် လှဲအိ ပ် ချ လိုက် ပါ တယ် ..။ အ မှောင် ထဲ မှာဘ မိုး က ကျော့ရီ ရဲ့ပေါင် တန် တွေ ကြား က စောက် ပတ် ကြီး..ကိုလက် နဲ့စမ်းလိုက် တော့စောက် ရေ တွေ အ ရမ်းသိုစိ စွ တ် နေ တာ တွေ့လိုက် ရ လို့ သူ က လေး လဲ စိ တ် တွေ ကြွ နေ ပြီးလိုချင် နေ ပြီ ဆိုပြီးအား တက် သွား ပါ တယ် ...။ ဘုမိးလဲ သူ့လုံချည် ကိုချွတ် ပစ် လိုက် ပါ တယ် ..။ ကျော့ရီ ရဲ့လက် က လေး ကိုဆွဲယူ ပြီးလီးတန် ကြီးကိုဆု တ် ကိုင်င် ကြည့်စေ တယ် ...။ ( အို..မာ ..မာ မာ ကြီးနော်...ပူ နွေးနွေးကြီး....ထောင် နေ လိုက် တာ အ ကိုရယ် ....) ( ကျော့ရီ ...အ ကိုသိ ပ် ချစ် တယ် ကွာ...ချစ် တော့မယ် ..ကျော့ရီ.... အ ကို့ ဒီ အ ချစ် ချောင်းချောင်းကြီးကိုကျော့ရီ ရဲ့ရ တ နာေ၇ွှကြုတ် လေး ထဲ ကိုနှ စ် မြုပ် ချင် နေ ပြီ...ကေ ...ကျော့ ရီ...) ...) ကျော့့ ရီ က ( အ ကို့ သ ဘော...ဒါ ပေ မဲ့ကြောက် တယ် အ ကို...) လို့ ပြန် ပြောပါ တယ် ...။ ( မ ကြောက် ပါ နဲ့ကျော့ရီ ...အ ကိုကျော့ရီ မ နာ အောင် လု ပ် မှာပေါ ...) .့ ..)ုပံုးခိ ကျင်းင်းဟောင်းကြီးထဲ ရ မက် ဇော ထန် နေ တဲ့ဘုမိးကျော့ရီ ရဲ့ပေါင် တန် တွေ ကိုဖြဲ ကား လိုက် ပြီးသူ့လိင်င် တန် ကိုကျော့ရီ ရဲ့အ ကွဲ ကြောင်းတ လျောက် ပွ တ် တိုက် တော့ကျော့ရီ ရဲ့အ ရေ တွေုစိ လွန်န်း နေ တဲ့စောက် ဖု တ် ကြောင့်ပ လပ်..ပ ..ပ လပ် ..နဲ့အ သံ ထွ က် နေ တယ် ..။ ကျော့ရီ လဲ ဘုမိးဒစ် ကြီးသူ မ အ ကွဲကြောင်းမှာဖိ ပွ တ် နေ တာ တ ချက် တ ချက် သူ မ စောက် စိ လေး ကိုခ လု ပ် တိုက် သွား တာ ကျော့၇ီ လဲ ထွဲန်န့်ထွန်န့်လူးနေ ပြီ..။ ..။ ဘုမိးနှုတ် ခမ်းထူ ထူ ကြီးက ကျော့ရီ ရဲ့တင်းမာ ဖီးထ နေ တဲု့နိ့တွေ ရဲ့ထိ ပ် ဖုနိ့သီးခေါင်းလေး ကိုငံ ပြီုးစိ့နေ တယ် ..။ တ ချိ န် ထဲ မှာဘဲ ကျော့ရီ စောက် ပတ် အ ၀ ကိုဒစ် ကြီးရှာတွေ့သွား ပြီ..။ ..။ စမ်းထိုး ကြည့်တဲ့အ နေ နဲ့ဘုမိုးနိ့တွေ ကိုတ ဖက် ကြီးတ ဖက်ုစိ့နေ တဲ့အ ချိ န် ထိုး ထဲ့တယ် ..။ ဘုမိးနှူး နှ ပ် ပ် ထား တာ တွေ ကြောင့်ကျော့ရီ ဟာ အ ရမ်းကိုဘဲ စိ တ် တွေ ရွ ပြီးခံ ချင် စိ တ် တွေ ပြင်းထန် နေ ရ တော့အေ၇ တွေ ဟာ စောက် ပတ် တ ခု လုံး ရွှဲ ရွှဲုစိ နေ ပြီ ဆိုတော့ဒစ် တ ခု လုံး မြုပ် ၀င် သွာုးနိင်င် တယ် ..။ ချောင် ချောင် လည် လည် တော့မ ဟု တ် ဘူး..။ အ ပျိုစင် စောက် ပတ်ုမိ့သူ့လီးထိ ပ် ခေါင်းဒစ် ပြဲ ကြီးဟာ စောက် ပတ် နှုတ် ခမ်းသား နု နု လေး နှ စ် စ် ဖတ် ကြား တင်းနေ အောင် ညပ် နေ တာ ခံ စား ရ တယ် ..။ ကျော့ရီ မှာခံ လဲ ခံ ချင် ..စောက် ပတ် ကွဲ မှာလဲ ကြောက် ..ဖြစ် နေ တယ် ..။ တ ခါ က ရွာ ထဲ လီးကြီးကြီးနဲ့အ ရက် သ မား က မူးမူးနဲ့မ င်္ဂ လာ ဦးည မှာမ ယား အ သစ် စက် စက် လေး ကိုတ အား တက် လိုး တာ စောက် ပတ် ကွဲလို့ မြို့က ဆေုးရံ ကိုည တွင်း ချင်းချင်ုးပိ့ပေး ကြ ရ တာ မြင် ဘူးခဲ့တယ် လေ..။ ဒါ ပေ မဲ့ဘ မိုး က ကျော့ရီ ဟာ အ ပျုိစစ် စစ် ဆိုတာ သိ တာ နဲ့အ ရမ်းကြီးထိုး မ ထဲ့ဘဲ ချော့ပြီးထည့်လို့ နာ ကျင် မှူရှိပေ မဲ့တ ဖက် က လဲ ဆန့်ကျင် ဖက် ယောကျား င်္ား င်္ ရဲ့လိုး တာ ကိုခံ ချင် တဲ့သ ဘာ ၀ ကာ မ စိ တ် စိ တ် က လဲ ပြင်းပြ နေ လို့ ဘုမိးလိုး တာ ကိုတ ဟင့်ဟင့်နဲ့ခံ နေ ပြီုးပိ အ ဆင် ပြေ စေုဖိ့ပေါင် တန် တွေ ကိုအ စွ မ်းကုန်န် ကား ပေး ပါ တယ် ...။ ဘုမိးလဲ မိန်နးမ်ကျမ်းမ်းကျေ သူ တ ယောက် ဖြစ် တာ ကြောင့်..အ ပျို စောက် ပတ် ကျပ် ကျပ် ကိုဘယ် လိုကျင့်ပေး ပြီးလိုး ရ မယ် ဆိုတာ ကိုသိ တဲ့လူ ပါ..။ုဗံုးခိ ကျင်းင်းဟောင်ုးမိ့လို့ မှောင် မဲ ပူ အိုက် ပြီးအ နံ့အ သက် မ ကောင်းပေ မဲ့နေ့ခင်းကြောင် တောင် ကြီးလု ပ် ကြုဖိ့က ဒီ နေ ရာ က သူ တို့ အ တွက် အ ကောင်း
ဆုံုးမိ့သည်းး ညည်းး ခံ ပြီးလိုရာ ပန်းတိုင်င် ကိုေ၇ာက်ုဖိ့ကြိုး စား ကြ တော့တယ် ...။ ဘုမိးက လီးကြီးကိုစောက် ပတ် ထဲ အ မျာားး ကြီးကြီးဝင်ုနိင်င်ုဖိ့မ ကြိုး စား သေး...။ ၀င် သ မျှ..ရ နိုင်င် သ မျှလေး ကိုဘဲ ဖင် ကိုကြွ ပြီး....ေ၇ှ့တိုး နောက် ငင် ...အ လိုး တိုလေး တွေ တ စွ ပ် စွ ပ် နဲ့က စား ပေး ပြီးလိုး နေ တယ် ..။ ကြာ လေ အ ရေ လိုက် လာ လေ ဘဲ..။ ..။ တ စွ ပ် စွ ပ် အ သံ တွေ နဲ့တ အင်းအင်းနဲ့ကျော့ရီ ရဲ့ညီးငြူသံ တွေ က မဲ မှောင် နေ တဲု့ဗံုးခိ ကျင်း ထဲ ကျ.်လောင် သ လိုဖြစ် နေ ပါ တယ် ...။ ကျော့ရီ လဲ ည က စောက် ပတ် အ ယက် ခံ ရ ပြီးစောက် ပတ် ထဲ က ရွ စိ ရွ စိ နဲ့တ ခု ခု ထိုး ထည့်ပြီးလိုလား တောင့်တ နေ တဲ့ကာ မ ဆ န္ဒ ကိုဖြေ ဖျောက်ာက် လိုက် ချင် ပေ မဲ့တော ကောင် ရွာထဲ ၀င် လို့ လူ တွေ ဘိုတဲ ကိုရောက် လာ လိုက် တာ ကြောင် ..ခ့ ..ခ ရီးလမ်းဆုံး ကိုမ ရောက် လိုက် ရ ဘဲ ဆန့်တ ငန့်ငန့်ဖြစ် ခဲ့ရ တယ် ..။ မ နက် ထဲ က ၀န် ထောက် မင်းအ ကိုဒီ တ ခါ သူ မ ကိုလု ပ် ၇င် တော့လမ်းဆုံးေ၇ာက် အောင် ကိုသွား ပစ် လိုက် မယ် လို့ အား ခဲ ထား ခဲ့ပါ တယ် ..။ဒါ ကြောင့်လဲ ကျော့ရီ မီုးဖိ ထဲ လိုး ချင် တဲ့အ ကို့ ကိုဗံးခိုကျင်းင်းအ ဟောင်းကြီးထဲ ခေါ် လာ ခဲ့တာ ပေါ ...။ .့ ..။ ဘုမိးလဲ ကျော့ရီ ကိုလိုး ရ တာ တ ချက် ဆိုတ ချက် ထိ မိ ပြီးအ ၇ သာ ရှိနေ တာ ကြောင့်ပြီးသွား ခါ နီးဖြစ် လာ လို...ဆက့် ...ဆက် မ လိုး သေး ဘဲ နို့ တွေ ကိုလျာ ကြီးကြီးနဲ့ထိုး ဆွ က လိ လိုက်ုစိ့ပေး လိုက် လု ပ် နေ ပြန် တယ် ...။ ကျော့ရီ မှာလဲ ထိုး ပေး နေ လို့ အ ရ သာ ကောင်းဆဲ အ ကိုက လီးတပ် ရက်ာကီးနဲ့ဆက် မ လိုး ဘဲ နို့ တွေ ဖက် လှဲ့ နေ တာ ကြောင့်ရွ နေ တဲ့စောက် ပတ် က အ ရမ်းယား ပြီးပွ စိ ပွ စိ ဖြစ် နေ ရ တာ ကြောင့် ...( ...( အ ကို..လု ..လု ပ် မှာဖြင့်လု ပ် လေ..ကြီးကြီးတင် ကျော့ရီ ကိုလိုက် ၇ှာနေ အုံး မယ် ) လို့ အောက် က နေ ဖင် ကြီးတွေ ကိုကော့ပြီးပြော ပါ တယ် ..။ ဒီ တော့မှ ဘုမိးလဲ ကျော့ရီ ခါး လေး က နေ ဆွဲကိုင်င် ပြီးဆက် လိုး ပါ တယ် ...။ ဘ မိုး တ ကိုယ် လုံလဲ ချွေးချွေးတွေုစိ ရွှဲ နေ တယ် ..။ ကျပ် လွန်န်း တဲ စောက့် စောက် ပတ် ကြောင့်ဘုမိးကြာ ရှည် ည် မ ထိန်န်းုနိင်င် ဘဲ သု တ် ရေ တွေ အ မျာားး ကြီးကြီးကျော့ရီ ရဲ့စောက် ခေါင်းထဲ ပန်းထည့်ကာ ကာ မ စည်းး စိ မ် အ ပြည့်အ ၀ ရိရှ သွား ရ ပါ တယ် ...။ ကျော့ရီုဗံုးခိ ကျင်းင်းဟောင်းကြီးထဲ က တက် လာ ပြီးထ မိန်န် ပြင် ၀တ် ပြီးမီုးဖိ ခန်းထဲ ပြန် ရောက် ပြီးမ ကြာ ခင် ဘဲ သူ မ မျှော် လင့်ထား သ လိုကြီးကြီးတင်ေ၇ာက် လာ ပါ တယ် ..။ ( ကျော့ရီ ...မ ပြီးသေး ဘူးလား ...ဟင်း...ဟင်းလေး တ ခွ က် ချက် နေ တာ ကြာ လှ ချည် လား.....) ( ပြီးပါ ပြီ... ... ကြီးမေ ...ေ၇ှ က် ရွက် လေး သု တ် မ လို...)့ ...) ( အေး... ၀န် ထောက် က လေး ကိုကောင်းကောင်းဂ ရုစိ က် ရ မယ် အေ့...သူ က ပေါက် ရောက် တယ် .. နင့်ဘ ဘုပိ ပြီးကောင်းစာုးဖိ့က မြို့က အ ရာ ရှိတွေ ကိုအ စွ မ်းကုန်န် ပြု စု ရ တယ် ဟဲ ....)့ ....) ( ကျော့ရီ လဲ အ ကောင်းဆုံး လု ပ် ကိုင်င် ပေး ပါ တယ် ကြီးမေ ရယ် ...) ( အေး..ကောင်းတယ် ...၀န် ထောက် က လေး က လဲ လူ ပျို...သိ လား....ဟင်း...နင် က လဲ ရွာမှာအ ချော ဆုံး ..ငါ့တူ မ အ ကြောင်းငါ အ သိ ဆုံး...နင့်အ ချက် အ ပြုတ် ၀န် က လေး ကြိုက် သွား ပြီးတော်ကောက် သွား ရင် တော့ကျော့ရီ..နင် ..နင် တောု့စိင်င် ကော်လို့ ခြုံ ပေါ်ေ၇ာက် ဆိုသ လိုဝန် က တော်ဖြစ် သွား မှာ..ဟ..ဟဟ...) သူ ကြီးက တော်ကြီးကြီးတင် က သူ မ ရဲ့ဝ ဖီးတဲ့ကိုယ် လုံး ကြီးကိုလှုပ် သွား အောင် ရီ မော နေ ပြီး..ဟဲ့နင့်ထ မိန်န် က လဲ ဘာ တွေ ကွ က် နေ တာ လဲ..) လို့ ကျော့ရီ ဖင် မှာကွက် နေ တာ တွေ့ပြီးမေး လိုက်
ပါ တယ် ..။ ( ဟင်းချက် ရင်းပေ ကျံ ကုန်န် တာ ပါ ကြီးမေ...) ဆိုပြီးထ မိန်န် လှဲ့ ၀တ် လိုက် ရ တယ် ..။ ဘုမိးနေ့ လည် စာ စား တော့သူ ကြီးနဲ့သူ ကြီးက တော်တို့ ယပ် ခပ် ပေး ကြ ..ရေ ခပ် ပေး ကြ နဲ့ပေါ ..။ .့ .။ ဘုမိးက ရွာ စည်းုးရိးအ ခြေ အ နေ သူ ကြီးကိုမေး တယ် ..။ တော ကောင် ၇ွာထဲ ၀င် တာ ကြောင့်အ စိရှ နောင် ကိုလဲ ၀င်ုနိင်င် တာုမိ့ဒီ တော ကောင် ကိုရွာပြင် တော အု ပ် ထဲ ခြေ ရာ ခံ ကြည့်ရင် ကောင်းမယ် လို့ ဘုမိးက အ ကြံ ပေး တယ် ..။ ည နေ ဘက် ရောက် တော့သာ ယာ ၀ တီ မြို့ သစ် တောုရံးက တော အု ပ် ကြီးတ ယောက်ေ၇ာက် လာ ပြီးစစ် တပ် နဲ့ရန် ကုန်န် ကိုတက်ုဖိ့ကြိုး စား နေ တဲ့သူ ပုန်န် တွေ ကျွန်း်း က လေး တံ တား မှာတိုက် ပွဲ ဖြစ် ကြ တဲ့သ တင်းပြော ပြ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ တော ကျ မ်ွမ်ွး တယ် ဆိုတဲ့တော ခေါင်းမောင် ပြား ကိုခေါ် ပြီးတော စပ် မှာတော ကောင် ၇ဲ့ခြေ ရာ ကိုလိုက် ကြည့်ပါ တယ် ..။ မောင် ပြား မှာနှ စ် လုံး ပြူး သေ နတ် တ လက် ပါ သ လိုဘုမိးမှာလဲ ၃၀၃ုရိင်င် ဖယ် တ လက် ..သူ့လက်ဲစွ တော်ခြောက် လုံး ပြူး ရော ပါ တယ် ..။ တော ကျ မ်ွမ်ွး ပြီးခြေ ရာ ခံ ကောင်းတဲ့မောင် ပြား က ဘ မိုး ကိုတော ကောင် ရွာစည်းုးရိးဘေး က နေ ပတ် နေ တဲ့ခြေ ရာ တွေ ..ပြ တယ် ..။ ကျား ခြေ ရာ တွေ လဲ တွေ့သ လိုကျား ချီးး လဲ တွေ့တယ် ..။ ( ကျား လဲ ကြောက် ရ..ကျား ချီးး လဲ ကြောက် ရ ) ဆိုတဲ့စ ကား ကိုသ တိ ရ ပြီးပြုံး မိ သေး တယ် ...။ တော ထဲ ကိုကျား ခြေ ရာ နောက် က လိုက် ကြည့်တော့တော ဆင် အု ပ် ရဲ့ခြေ ရာ နဲ့ဆင် ချီးချီးတွေ ပါ တွေ့ရ ပြီးည က ရွာထဲ ၀င် ပြီးတင်းကု တ် က နွား ကိုဆွဲ တဲ့ကျား ဟာ ရွာက လူ တွေုနိးပြီုးဝိင်င်း လိုက် လို့ ရွာနဲ့ဝေး ရာ ကိုပြေး ခဲ ရာ့ ရာ က ငါ့ဝမ်းပူ စာ မ နေ သာ ဆိုသ လိုဆင် အု ပ် မှာပါ တဲ့ဆင် ပေါက် စ လေး ကိုစား ချင် တဲ့အ တွက် ချောင်းချောင်းအ တိုင်င်း ချောင်းချောင်းဘေး က ကျ သောင်းသောင်းဝါး တွေ ကိုစား ရင်းသွားကြ တဲ့ဆင် အု ပ် နောက် က လိုက် နေ တဲ့ခြေ ရာ တွေ ကိုတွေ့ကြ ရ တယ် ..။ တော ခေါင်းမောင် ပြား က ဆင် ပေါက် လေး ရဲ့ခြေ ရာ..ချီးရာ..ချီးတွေ ကိုပြ သ လိုနောက် က လိုက် ချောင်းချောင်းပြီးည အ မှောင် ထု ကိုအ ကာ အ ကွ ယ် လု ပ် ပြီးဆင် ကြီးတွေ အ လစ် မှာဆင်ပေါ ပေါ က်လေး ကိုဆွဲချင် တဲ့ကျား ရဲ့ခြေ ရာ တွေ ကိုလဲ ပြ တယ် ..။ တော ထဲ မှာမျောက်ာက် တွေ အု ပ် လိုက် သစ် ပင် ကြီးတွေ ပေါ် ဆူ ညံ နေ တာ လဲ တွေ့ရ တယ် ..။ ( မောင် ပြား....ဟိုဟာ ဘာ ငှ က် တွေ တုံး..) ( အဲ ဒါ ငှ က် င နွား ပါ..၀န် ထောက် မင်း.....) ( မောင် ပြား..ဒီ တော ကောင် ရွာ ဘက် ပြန် လှဲ့ အုံး မယ် ခင် ဗျား ထင် လား....) ( လှဲု့နိင်င် တာ ပေါ့ဝန် ထောက် မင်း...) ( ကျ နော် ကြား ဖူးတာ တော့ကျား တွေ က အိုလာ ပြီးဒ ရယ် တို့ ချေ တို့ မ လိုက်ုနိင်င် တော့ဘူးဆိုရင် လူ တွေ နေ တဲ့ရွာ တွေ ၀င် ပြီးတင်းကု တ် ချည် တိုင်င် က နွား ကိုရန် ၇ှာလာ တတ် တယ် ပေါ ...) .့ ..) ( ဟု တ် ပါ တယ် ...) နေ ၀င် ခါ နီးမှ ဘုမိးနဲ့မောင် ပြား ရွာထဲ ပြန် ရောက် ကြ တယ် ..။
ကျော့ရီ က ည စာ ထ မင်းဟင်းတွေ နဲ အ့ဆင် သင့်ပြင် ပြီးစောင့်နေ တာ မို့ ဆာ ဆာ နဲ့စား သောက် ကြ တယ် ..။ ( ဒီ အ တိုင်င်း ဆိုကျ နော် တော့ဝ လာ တော့မယ် ထင် တယ် ...မ နက် နဲ့ည ဟင်းကောင်းတွေ ချက် ကျေွးွး နေ လို့ ...) သူ ကြီးလင် မ ယား ယား က ( ကျော့ရီ လက် ရာ ကိုကြိုက် ရင် ၀န် ထောက် မင်း..မြို့ပြန် ရင် ခေါ် သာ သွား ပေ တော ...) .့ ..) လို့ ပြော ပါ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ တော ထဲ က ပြန် လာ လို့ ခြေ သ လုံး နဲ့ပေါင် တွေ ညောင်းး ညာ ကိုက် ခဲ နေ တော့..ကျ နော် နား အုံး မယ် ဗျာ..ခင် ဗျား တို့ လဲ ပြန် နား ကြ တော ..) .့ .) လို့ ပြော လိုက် မှ သူ့ဘိုတဲ ပေါ် လာ ပြီးလေ ကန် နေ တဲ့သူ ကြီးနဲ့တော ခေါင်းတွေ ထ ပြန် ကြ တယ် ..။ သူ ကြီးက တော်ကြီးကြီးတင် က ဘိုတဲ ပေါ် က ဆင်းခါ နီး..( ဟဲ့ကျော့ရီ....နင် ....နင့်အ ကိုဝန် ထောက် မင်းကိုနင်ိးနှ ပ် ပေး လိုက် ...၀န် ထောက် မင်းအ ညောင်းပြေ မှ နင် ဘေး က အိ မ် ပြန် အိ ပ် ပေါ ....) .့ ...) လို့ ကျော့ရီ ကိုနေ ခဲု့ဖိ့ပြော ပါ တယ် ....။ ( အား နာ စ ရာ ဗျာ...ကျော့ရီ က မ နက် ရော ည ရော ထ မင်းဟင်းတွေ ချက် ပြုတ် ရ တာ သူ လဲ နား ချင် ရော ပေါ့...) ( ကျော့ရီ က တ ခြား ဘာ မှ လု ပ် စ ရာ မ လိုတာ ဘဲ ၀န် ထောက် မင်းရယ် ..ကဲ ကျော့ရီ ..သွား...သွား....နှိပ် ပေး ...နင်းပေး ကွယ်....) လူ တွေ အား လုံး ပြန် သွား ကြ တော့ကျော့ရီ နဲ့သူ ဘဲ ဘိုတဲ ပေါ် ကျန် တယ် ..။ ( ကျော့ရီ... ... နေ ကောင်းရဲ့လား..) ခေါင်းလေး ငြိ မ့်ပြ ပေ မဲ့တ ကယ် တော့သူ လိုး ထား တာ ကျော့ရီ စောက် ပတ် တွေါ ဖွ တာ တာ ကြီးကြီးကျ မ်ိမ်ိး စပ် နေ တယ် ..။ ပေါင် တွေ လဲ အောင့်နေ တယ် ..။ ဒါ ပေ မဲ့ကျော့ရီ သ်ိပ် ပျောာ် နေ ခဲ့တာ လေ..။ ကျော့ရီ ရဲ့အ ပျုိ စင် ပန်းကိုအ ကိုဝန် ထောက် မင်းချွေ သွား တာ ကိုဘဲ သိ ပ် ကျေ နပ် နေ ခဲ့ရ တာ လေ..။ ခန့်ငြား ပြီးယောက်ျာားး ပီ သ တဲ့အ ကို့ လိုလူ ကိုဘယ် မိန်န်း မ က မ ကြိုက် ဘဲ နေ ပါ့မ လဲ ရှင်င..ကေ်..ကျော့ ရီ လိုတော သူ ကိုသူ က ကုန်န်း ကုန်န်း ပြီးစောက် ပတ် ယက် ပေး ခဲ့တာ..ကျော့ရီ သူ့ကိုကေ ကျေးဇူးဇူးတောင် တင် နေ ရ တာ...။ ( ကျော့ရီ ကိုအ ကိုသိ ပ် ချစ် တာ ဘဲ...) ...) ကျော့ရီ ကျေ နပ် နေ တယ် ..။ အ ကို့ ပုခံးထက် မှာခေါင်းလေီးမှ ချ ပြီးပြီးအ ကို့ ကိုပြန် ဖက် ထား လိုက် တယ် ...။ ကျော့ရီ ကျော လေး ကိုအ ကိုက ပွ တ် ပေး နေ တယ် ..။ ( အ ကို...နင် ...နင်ိးနှ ပ် ပေး ရ မ လား ဟင် ...တော ...တော်တော်ညောင်းလား...) ( ဟင့်အင်း...နင်ိးနှ ပ် တာ မ ခံ ချင် ဘူး...အ နမ်းဘဲ ခံ ချင် တယ် ...) ( ဟင့် ....အ ....အ ကိုက လဲ....) ....) ဘုမိးက စ ပြီးနမ်းပါ တော့တယ် ...။ ဖွ ဖွ လေး ပါး ပြင် ကိုနမ်းတဲ့အ နမ်းတွေ က ကျော့ရီ ရဲ့ရင် ကိုအေး မြ စေ ပေ မဲ့အ ကို့ အ နမ်းတွေ က တ ဖြေး ဖြေး နဲ့ကြမ်းလာ တယ် ...။ ကျော့ရီ ရဲ့ရင် တွေ ဘ လောင် ဆူ လာ ရ အောင် အ ကိုက ကာ မ ခ လု ပ် တွေ တ ခု ပြီးတ ခိုနှ ပ် လာ ပြီ...။ ...။
နေ့လည် က အ မော ဟောင်းတွေ တောင် ပြေ မယ် မ ကျန် သေး ဘူး...အ မော သစ် တွေ က စ လာ ပြီ ကွ ယ် ......။ အ ကိုက မ နေ့ါက စ နမ်းတုံး က လိုဘဲ နမ်းတာ ခ ဏ ရပ် ပြီး....( အ ကိုနမ်းသ လိုပြန် နမ်း..ကျော့ရီ...) ...) လို့ ပြော ပြန် တယ် ..။ စိ တ် အ ညှို့ခံ ထား ရ တဲ့လူ လိုဘဲ ကျော့ရီ အ ကိုခိင်င်း တာ တွေ ကိုလု ပ် ရ ပါ တော့တယ် ....။ အ ကိုဟာ ကျော့ရီ ရဲ့ကာ မ လက် ဦးဆ ရာ ပါ ...။ အ ကိုရဲ့အ ကိုင်င် အ တွယ် တွေ ကြောင့်ကျော့ရီ စောက် ပတ် က အ ရေ တွေ တ အား ယိုစီးကျ လာ ရ ပြန် တယ် ..။ အ ကို့ ရဲ့ဖွား ဖက် တော်လိင်င် တန် ကြီးကိုအ ကိုကိုင်င်ုခိင်င်း လို့ ကိုင်င် ရ ပြန် တော့ကြက် သီးတွေ တ ဖြန်းဖြန်းထ ရ ပြီးပြီးအ ရေ တွေ ကိုမ ထိန်န်းုနိင်င် တော့ဘူး..။ စောက် ခေါင်းအ တွင်င်း က တ ဆစ် ဆစ် နဲ့ဒီ အ တန် ကြီးကိုဖိ တ် ခေါ် နေ မိ ပါ ပြီ...။ ...။ နေ့လည် က လိုး ထား လို့ နာ ကျင် နေ ပေ မဲ့အ ကို့ ရဲ့အ ထိ အ တွေ့တွေ ကြောင့်ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ပတ် က တ ရွ ရွ နဲ့ခံ ချင် လာ ပြန် တယ် ..။ အ ကိုက ကျော့ရီ အ ၀တ် တွေ ကိုချွတ်ါခွ နေ တယ် ..။ သူ လု ပ် တာ တွေ ကိုကျော့ရီ ကျေ နပ် နေ မိ ပါ တယ် ..။ ရွာထဲ က သူ ငယ် ချင်းချင်းမိ အေး စိန်န် တို့ ..ဖေါ့လေး တို့ သာ သိ ရင် ..ဟယ် ကောင် မ ကျော့ရီ ညီးသစ် တော ၀န် ထောက် နဲ့ညား နေ ပါ လား ဆိုပြီးတ အား အ ထင် ကြီးကြ မှာဘဲ လေ...။ လက် ဆွဲ မီးအိ မ် ကြီးရဲ့အ လင်းရောင် အောက် မှာကျော့ရီ ဟာ အ ၀တ် မဲ့နေ ပြီ..။ ..။ ဒါ ပေ မဲ့ကျော့ရီ မ ရှ က် တော ..။ .့ .။ တ ဏှာစိ တ် တွေုဖံးနေ ပြီ ...။အ ကိုက ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ပတ် ထဲ ကိုလက် နဲ့ထိုး မွှေနေ တယ် လေ..။ုနိ့ထွား ထွါး တွေ ကိုလဲ ဆု တ် ကိုင်င် လိုက်ုနိ့သီးခေါင်းတွေ ကိုစိ့ပေး လိုက် နဲ့လု ပ် နေ တယ် ..။ ကျော့ရီ မှာတ ဏှာစိ တ် တွေ တ အား ယိုဖိ တ် ရ တော့တာ ပေါ ...။ .့ ..။ အ ကို့ လက် ချောင်းချောင်းတွေ က ကျော့၇ီ ရဲ့ဖင် ၂ လုံး ကြား ထဲ ကိုလဲိနှုက် နေ တယ် ...။ အို..ကေ ..ကျော့ ရီ ရဲ့စောက် ပတ် ထဲ က ထွက် တဲ့အ ရေ တွေ က ဖင် ပေါက် အ ထိ စီးကျ နေ တော့အ ကို့ ရဲ့လက် ညှိုး က အဲ ဒီ အ ရေ တွေ ကြောင့်ကျော့ရီ ရဲ့စ အိုပေါက် လေး ထဲ ကိုသိ ပ် ခဲ ယဉ်းတာ မ ရှိဘဲ တိုး ၀င် လာ နေ ပါ တယ် ...။ အ ကိုက သိ ပ် ကာ မ ကျမ်းမ်းကျေ တဲ့လူ ကြီး...ပါ...။ ကျော့ရီ စိ တ် ထ လာ အောင် သိ ပ် လု ပ် တတ် တာ ဘဲ....။ ....။ စ အိုပေါက် လေး ကိုသူ ကောင်းကောင်းက လိ ပါ တော့တယ် ..။ စိ တ် ထဲ က တော့အ ကိုရယ် မ ရွံဘူးလား...အား နာ လိုက် တာ လို့ ပြော မိ တာ ပေါ ..။ .့ .။ ပါး စပ် က တော့အ ကိုညို ညင် မှာုစိးလို့ ဘာ မှ ပြော မ ထွ က် ပါ ဘူး....။ အ ကိုက ကျော့ရီ ကိုကု တင် ပေါ် ပေါင် ဖြဲုခိင်င်း ပြီးသူ က ကု တင် အောက် မှာဒူးထောက် ထိုင်င် ပြီးကျော့ရီ စောက် ပတ် ကိုစ ပြီးယက် ပေး ပါ ပြီ...။ ...။ ကျော့ရီ စောက် ပတ် ကိုသူ ယက် တိုင်င်း စိ တ် တွေ သိ ပ် ထ ရ တာ အ ကို့ အ ပေါ် က တောင် တက် ခွ ပြီးလိုး ဆောင့်ချင် လာ ရ တယ် ..။ ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ပတ် ထဲ အ ကို့ လျာ ကြီးကြီးတိုး ၀င် လာ ပြီးမွှေတော့တာ ဘဲ..။ တတ် လဲ တတ်ုနိင်င် တဲ့ဝန် ထောက် မင်းအ ကိုပါ ဘဲ...။ ...။ ကျေ့ာရီ စိ တ် တွေ ကိုဆွ ပေး တတ် တဲ့အကိုဟာ စောက် စိ ကိုလဲ လျာ ထိ ပ် ထိ ပ် နဲ့ထိုး က လော်လိုက် ..ပြွ တ် က နဲစုစ ပ်ု လိုက် ..လျာ ပြား နဲ့ယက် လိုက် လု ပ် တော့အ ၇ှ က် ကြီးပါ တယ် ဆိုတဲ့တော သူ ကျော့ရီ ဟာ အ ရှ က် ကုန်န် ရ တဲ့ဘ ၀ ကိုရောက် ရ ပြီ...။ ...။
( အ ကိုရယ် ...လု ပ် ပါ တော့ရှင်င....)်....) လို့ ထု တ် တောင်းဆိုရ ပါ တော့တယ် ....။ ကျော့ရီ တ ကိုယ် လုံး လဲ အ ကို့ အ တွ က် လိုရာ သုံး စေ ဘဲ လေ..။ ခွင်င့်ပြု ချက် ရ ထား တဲ့အ ကိုဟာ ..သူ ယက် ပေး ထား လို့ အ ရမ်းကိုရွ နေ တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ပတ် ကိုသူ့အ တန် ကိုထိုး ထည့်ပါ တော့တယ် ...။ အ ရေ တွေ ရွှဲ ရွှဲုစိ နေ တာ တောင် ခု မှ လိုး ဘူးတာ ဒု တိ ယ အ ကြိ မ် ဘဲိရှ သေး တဲ့စောက် ပတ် အ သစ် လေုးမိ့အ တန် ကြီးက တင်းကျပ် နေ တယ် ..။ ( အိ ...အ....အ.....အ ကိုရယ် .....ဖြေး ဖြေး......နော် ...) အ ကို့ အ တန် တု တ် တု တ် က ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ပတ် နှုတ် ခမ်းသား တွေ ကိုအ ထဲ ကိုလိ ပ် ဆွဲယူ သွားတယ် ကွယ်...။ အ ရေ တွေုစိ နေ တာ ကြောင့်သာ တော်သေး တာ ပေါ ...။ .့ ..။ ကျော့ရီ လေ..အ ကို့ ဟာ ကြီးကိုအ ကြိုက် တွေ့နေ ရ ပါ ပြီ..။ ..။ အ ကိုလဲ တ ချက် ချင်းချင်းမှန်န် မှန်န် လေး လိုး ပါ တော့တယ် ..။ ကျော့ရီ လဲ အ ကို့ ကိုပြန် ဖက် ထား ပြီးမျက် လုံး လေး မှိတ် ထား တယ် ..။ အ ခု လိုဘဲ လှေ ကြီးထိုးရိုးရိုးပံ စံ နဲ့တော်တော်ကြာ ကြာ လေး လိုး ပြီးတော့အ ကိုက ကျော့ရီ ရဲ့ခြေ ထောက် တွေ ကိုသူ့ပုခံးပေါ် ထမ်းတင် လိုက် ပြီးကျော့ရီ ရဲ့ပေါင် တွေ ကိုဆု တ် ကိုင်င် ပြီးလိုး ပြန် ပါ တယ် ..။ တ ဖြေး ဖြေး နဲ့အ ကို့ လိုး ဆောင့်ချက် တွေ က ပြင်းလာ တယ် ..။ မြန် လာ တယ် ..။ အ ကို့ ရဲ့အ သက် ၇ှု သံ တွေ လဲ ရှူး ရှူး ရှဲရှ နဲ့မြန် လာ တယ် ...။ ဆောင့်တာ တွေ က အား ပါ လာ တယ် ။တ အား ဆောင့်ဆောင့်လိုး လာ တယ် ..။ အို..ကေ ..ကျော့ ရီ လဲ မွေ့ရာ ကိုကျစ် ကျစ် ပါ အောင် ဆု တ် ကိုင်င် ပြီးကော့နေ တာ ဘဲ ..။ ကောင်းလွန်း လို..။့ ..။ ကာ မ စည်းး စိ မ် ရဲ့ထိ ပ် ဆုံး ကိုရောက် သွား ရ တယ် ..။ ( အို..အား....အား........အင် ..အား....အား........အင်....ဟင် ....ဟင်...ဟင် ...ဟင်............) ............) ကိုယ် ချင်းချင်ုး၇ိ က် ခတ် တဲ့အ သံ တွေ က လဲုဖိုးဖိးဖတ် ဖတ် တွေ မြည် နေ တယ် ..။ တိ တ် ဆိ တ် နေ တဲ့တော စပ် က ဘိုတဲ ကြီးပေါ် မှာကျွ န်းကု တင် ကြီးတ ကျွိ ကျွိ မြည် တဲ့အ သံ နဲ့စောက် ပတ် နဲ့လီးအ ၀င် အ ထွ က် မှာအ ရေ တွေ ကြောင် ပြိ့ပြိ ..ပတ် ပတ် နဲ့အ သံ တွေ သာ ကျယ် လောင် သ လိုထင် ရ ပါ တယ် ..။ ကျော့ရီ လဲ ကာ မ လမ်းဆုံး ကိုတက် လှ မ်းပြီးပေ မဲ့အ ကိုက မ ပြီးသေး ဘူးဆိုတော့အ ကိုက ( ကျော့ရီ ...အ ကို့ ကိုလေး ဘက် ထောက် ပေး ပါ လား ) လို့ ပြော လာ တာ မို့ အ ကို့ စိ တ် ကြိုက် သူုခိင်င်း သ လိုနေ ပေး ရ ပါ တယ် ..။ ဘုမိးလဲ ကု တင် စောင်းမှာလေး ဘက် ကုန်န်း ပေး နေ တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့ဖင် ဖြူဖြူကြီးတွေ ကြား က နီ ညို ညိုစောက် ပတ် အ ကွဲမြောင်းကြီးကိုသေ ချာ စိုက် ကြည့်နေ တာ သူ့ဖွား ဖက် တော်လိင်င် တန် လီးက ဆတ် က နဲ ဆတ် က နဲ လှုပ် သွား တယ် ..။ စိ တ် တွေ တ အား ထန် နေ တာုမိ့မ လိုး သေး ဘဲ အ ရေ တွေ ပေ ပွ နေ တာ ကိုဂ ရု မုစိ က် ဘဲ ကုန်န်း ပြီးလျာ ကြီးကြီးနဲ့ယက် ပါ တော့တယ် ...။ ကျော့ရီ မှာဖင် ကုန်န်း ပေး ထား တဲ့အ ချိ န် အ ကို့ ရဲ့အ တန် ကြီးဝင် လာ မယ် လို့ မျှျေှာာ် လင့်ထား တာ အ တန် ကြီးမ ၀င် လာ ဘဲ လျာ ကြီးကြီးက တ ပြတ် ပြတ် ယက် လာ တော့အံ့အား သင့်သွား ပြီး...( အို..အ ..အ ကို...ကေ ...ကျော့ ရီ ဟာ ပေ ပွ နေ တယ် ..အား နာ စ ရာ ကြီး....) လို့ ပြော မိ ပေ မဲ့အ ကို့ လျာ ကြီးကြီးက စောက် ပတ် နဲ့စောက် စိ ကိုပွ တ် ပွ တ် ဆွဲသွား တာ အ သဲုခိ က် အောင် ဘဲ အ ရ သာ ထူးလှ တာ ကြောင့်တ ခါ “ ပြီး” ထား တာ တောင် စိ တ် တွေ က ပြန် ထ လာ ရ ပါ တယ် ....။
အ ကိုက ယက်ုရံ မ က စု ပ် လိုက် သေး တယ် ..။ အ ကိုစောက် ပတ် ယက် လိုက် စု ပ် လိုက် လု ပ် နေ တဲ့အ သံ တွေ က ကျယ် လောင် နေ သ လိုထင် ရ တယ် ...။ အ ကို့ လျာ ကြီးကြီးက ကျော့ရီ ရဲ့စောက် ခေါင်းထဲ ကိုတိုး တိုး ၀င် လာ နေ တယ် ...။ ကျော့ရီ ထွန ထွ့့် န်န် လူးနေ ၇ ပြီး( အ ကို..အ ကို..တော ..တော်ပါ တော့ရှင်င....လု....လု ပ် ပါ တော ....) .့ ...) လို့ မ ၇ှ က်ုနိင်င် တော့ဘဲ တောင်းဆိုရ ပါ တော့တယ် ...။ ကု တင် စောင်းမှာဖင် ထေါင် ထား တဲ့ကျော့ရီ ရဲ့ပြူး ထွ က် က် နေ တဲ့စောက် ပတ် ကြီးထဲ ကိုသူ့လီးတန် ကြီးထိုး နှ စ် လိုက် တော့ကျော့ရီ လဲ အ တန် ကြီးတင်းတင်းကျပ် ကျပ် ..စောက် ခေါင်းထဲ ၀င် လာ တဲ့အ ရ သာ ကိုအင်...အ ...အ ကို...အင် ...အင်...အ ...အ ကို...လိ ...လို့ ညည်းး ရင်းကျေ နပ် နေ ပါ တယ် ...။ တ ချက် ချင်းချင်းစ ပြီးလိုး ဆောင့်နေ ပါ ပြီ..။ ..။ မ ကြာခင် ဘဲ အ ကိုဟာ ခါး အား သန် သန် နဲ မ့ တ ရား လိုး တော့မယ် ဆိုတာ ကျော့ရီ သိ နေ တယ် လေ...။ ဘိုတဲ မှာအ ကိုဆွဲသ မှ မျှကိုပြဲ နေ အောင် ခံ မှာပါ ၀န် ထောက် မင်းအ ကိုရယ် .....။ နား ပါ ဦးမယ်
Share & Embed "ဘိုတဲမှာအကိုဆှဲမယျ"